မလေးရှား MGM သင်တန်းဆင်းပွဲ
(၁တိ ၂း၎- လူအပေါင်းတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍ သမ္မာတရားကိုသိစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏။)
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလမ်ပူမြို့ တွင် ၁၅.၁၀.၂၀၁၀ နေ့တွင် ပထမအကြိမ် MGM တပည့်တော်ဖြစ် သင်တန်းဆင်း ပွဲပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်။ ၎င်းသင်တန်းကို မြန်မာကျေးဇူးတော် သာသနာပြု လုပ်ငန်း(MGM)မှကြီး မှူးကျင်းပ ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀-စက်တင်ဘာလ၁၅ ရက်နေ့ တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ လ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် သင်တန်းဆင်းပွဲပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင်တန်းကို မြန်မာကျေးဇူးတော် သာသနာပြုလုပ်ငန်းတည်ထာင်သူ နှင့် ဥက္ကဌ ဖြစ်သူ Rev. Dr. ပေါလ်ခေကျိုင်း
မှ ဦးဆောင်ပြီးအတွင်းရေးမှူး Rev. စောကေလည်းပါဝင်ပါသည်။ သင်ကြားပို့ချပေးသောဆရာများမှာ Rev.Dr.ပေါလ်ခေကျိုင်း၊ Rev. စောကေ ၊ Pastor လိန်းကီး၊ ဆရာဘူနိုင်လိန်း၊ ဆရာထန်းနိုင်း ၊ ဆရာလရိန် တို့ဖြစ်ပြီး၊မြန်မာနိုင်ငံမှဧည့်သည် ဆရာအဖြစ် ဆရာစောလုကီ၊ ဆရာမြင့်ဆွေ၊ ဆရာပါဟုန်းတို့မှ လာရောက်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
ဤတလသင်ျန်းတွင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားသင်တန်းသား/ သူ ၁၀ဦး အချိန်ပြည့်တက်ရောက်ခံယူကြပြီး
မြန်မာကျေးဇူးတော်သာသနာ ပြုလုပ်ငန်းကို ၁၉၉၅ ခုနှစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အသက်သစ် (ကယ်တင်ခြင်းသင်တန်း)၊ တပည့်တော်ဖြစ်သင်တန်းနှင့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သင်တန်းများကိုလည်းပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ယနေ့ထိဤသင်တန်းကိုအသင်းတော်ဂိုဏ်ဂဏပေါင်းစုံမှလာရောက် နှုတ်ကပတ်ခံယူခဲ့သူသင်တန်းသား/ သူ ၅၀၀ကျော်မျှရှိခဲ့ပြီဟုသတင်းရရှိပါသည်။
MGM ဆရာများနှင့် သင်တန်းသား/သူများ အမှတ်တရဓါတ်ပုံ
MGM တည်ထာင်သူနှင့် ဥက္ကဌ Rev. Dr. ပေါလ်ခေကျိုင်း
MGM အတွင်းရေးမှူး Rev. စောကေ
MGM Pastor လိန်းကီး
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၂၀၀၀)ခန့်ကလူ့လောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူဋ္ဌေးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကဟာပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံမှာခရစ်တော် မပေါ်မှီ(၅)နှစ်ကစည်းစိမ်ဥစ္စာအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ ဂျူး(ယုဒ)
မိဘနှစ်ပါးမှဖွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ညီအကို(၆)ယောက်အနက် ကျွန်တော်ဟာအကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သလို
မြို့ထဲမှာကျင်းပတဲ့မိတ်ဆုံစားပွဲတွေ၊ မိတ်ဿဟာရပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲတွေကိုဖိတ်ကြားခြင်းခံရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါ
သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုဘူး။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လိုချင်တာအားလုံးကိုဝယ်ပေး
တယ်။ဒါတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေဟာ ကျွန်တော်ကိုအလွန်အားကျကြတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အပြစ်အမျိုးစုံကို ကျူးလွန်တတ်တဲ့အချိန်မှာအရွယ်အရောက်သေးပါဘူး။
ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့ဘာသာရေးခံယူချက်ဟာ လေးနက်မူမရှိပါ။သားသမီးတွေကို ဘုရား၊တရားအကြောင်း
ဘာတစ်ခုမှ သွန်သင်လမ်းပြခြင်းလည်းမရှိပါ။ဘုရားတရားရေးမှာ အချင်းချင်းငြင်းခုန်နေတာမျိုးကိုဖေဖေက
ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဘဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာ ဘုရား၊တရားမဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့……ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲမှာနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပေးနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပရောဖက်တပါးအကြောင်းကို လူတိုင်းပြောနေကြတယ်။လူအချို့ကသူ့ကို မေရှိယ လို့ထင်ကြတယ်။တကယ်တော့သူဟာ မေရှိယမဟုတ်ဘူး။
ကလည်းအဖျက်သမားတစ်ဦးလို့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘာသာရေးနဲ့ကင်းကင်းကွာကွာနေ လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုပျော်ပါးခြင်းနဲ့ကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော့ကိုကျွန်တော်အသက် ငယ်ငယ်နဲ့ သေမယ်လို့မထင်ခဲ့မိပါဘူး။
ကျွန်တော်အသက်(၂၀)ရောက်လာတဲ့အခါအရက်သမားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ကျန်းမာရေးလည်း ကျဆင်းယိုယွင်းလာပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာရောဂါဝေဒနာမျိုးစုံကိုပြင်းထန်စွာခံစားရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရောဂါမျိုးစုံစွဲကပ် လာတဲ့အတွက် ဆေးဆရာ ကိုအမြဲပြနေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘဲကျွန်တော်ဟာအသက်(၃၆)နှစ်ပြည့်ပြီး(၂)ရက်အကြာမှာ အသက်ထွက် သွားပြီးဒီငရဲထဲကိုရောက်လာပါတယ်။
ခြင်းခံရပါတယ်။မီးတောက်လောင်နေပြီး မီးခိုးနဲ့အမှောင်ထုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဒီငရဲထဲမှာ လူသန်းပေါင်းများ
အချိန်မှာအဝေးကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ချောက်ကြီးတစ်ခုပိုင်းခြားထားတဲ့အခြားတစ်ဖက်ကမ်းမှာ ထွန်းလင်းပြီးအလွန်သာယာလှပနေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။အဲဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည် သူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးအာဗြဟံနဲ့အတူအေးချမ်းစွာရှိနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်။
အဲ့ဒီထဲမှာ ကျွန်တော်လောကတွင်းအသက်ရှင်စဉ်တုန်းက ကျွန်တော့်အိမ်တံခါးရှေ့နားမှာခိုကပ်စား
ထမင်းကျွေးတိုင်း ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ သူကကျွန်တော်ကိုပြောပြတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့စကားကို
ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်မိခဲ့ဘူး။ အခုလာဇရုကိုအာဗြဟံရဲ့ရင်ခွင်မှာမြင်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော်နောင်တရမိတယ်။
ဒါနဲ့အာဗြဟံကို အဖအာဗြဟံ….အဖအာဗြဟံ ကျွန်တော့ကယ်မသနားမူပါ။ကျွန်တော်ဟာဒီငရဲမီးထဲမှာ ဝေဒနာ
နောင်တမလွန်ရေးအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ဒါကိုသင်အောက်မေ့သတိရပါ။
အခုတော့ လာဇရုကသက်သာခြင်းရှိတယ်။ သင်ကတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားရတယ်။
နောက်ပြီးငါတို့နဲ့သင်တို့စပ်ကြားမှာ အလွန်နက်တဲ့ချောက်ကြီးရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ဆီက သင်တို့ရှိရာသို့
ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာ အာဗြဟံနဲ့အတူ သာယာအေးချမ်းတဲ့နေရာမှာငြိမ်းချမ်းစွာရှိနေကြတာကို
စပါးကိုစပါးဂိုဒေါင်ထဲသွန်ချသလို ကမ္ဘာပေါ်မှလူသားတွေဟာငရဲမီးအိုင်ထဲကို အဆက်မပြတ်ရောက်
လာနေကြတယ်။ ငရဲမီးထဲရောက်တာနဲ့ကြောက်လန့်ကာ အော်ဟစ်ငိုကြွေးကြတော့တာဘဲ။ ကမ္ဘာကနေရောက်
လာတဲ့လူသစ်တွေက ကျွန်တော်တို့ကိုလောကမှာရှိတဲ့ လူသားတွေရဲ့ခေတ်မီတီထွင်မူနဲ့ ကမ္ဘာကြီးတိုးတက်
လူသားတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိုးတက်ကြပေမယ့် ဘုရား၊တရားရေးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ
စိတ်ဝင်စားမူမရှိကြဘူး။နိုင်ငံပေါင်းစုံကဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လူရွယ် သန်းပေါင်းများစွာဟာလည်း ငရဲထဲ
နေနေသာသာ တမှေးမှတောင်အိပ်လို့မရဘူး။ထမင်းဆိုလို့ဝေလာဝေးပဲ။ဓါတ်ဆီပီပါပုံးကြီးထဲ ဆီးဖြူသီးမ
ကျွန်တော်ပါးစပ်ဟတိုင်း မီးတောက်မီးလျှံတွေဟာ ပါးစပ်ထဲဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်ဟာဗိုက်ထဲမျို
လူလိုဘဲ ကျွန်တော်ဟာငရဲမီးထဲမှာနစ်မွန်းနေတယ်။ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေဟာ မီးခိုးမီးလျှံတွေကြောင့်ပူလောင်
ဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းမှာ လူ့လောကကမ္ဘာပေါ်တတ်လာပြီး သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်
ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတဲ့လူတွေကိုညှင်းဆဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငရဲမီးထဲမှာ သံကြိုးနဲ့ချည်နှောင်ခံထားရတဲ့ ကောင်းကင်တမန် တပါးကိုလည်း ကျွန်တော်တွေ့တယ်။
မေးတဲ့အခါ ကောင်းကင်တမန်ကသူဟာ တချိန်တုန်းက ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း လိုက်နာခဲ့တဲ့သန့်
ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ စာတန်မာရ်နတ်ရဲ့သွေးဆောင်မူနောက်ကိုလိုက်ပြီး ဘုရားသခင်
စာတန်မာရ်နတ်ဟာ ဘုရားသခင်ကလွဲရင် တန်ခိုးအကြီးဆုံးနဲ့အလှပဆုံးဖြစ်တယ်။
ကောင်းကင်တမန်များစွာဟာ မာရ်နတ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီး ဘုရားသခင်ကိုပုန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငရဲမီးထဲမှာ အခုလိုဒုက္ခခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ငရဲဟာမာရ်နတ်နဲ့ သူ့နောက်လိုက်အပေါင်းအသင်းတွေအတွက် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း
တွေဟာ အလွန်စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းနေကြပါတယ်။ယခုခေတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသက်ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့လူသားတွေ
ဟာ မာရ်နတ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင် သူတို့လိုဘဲဒီငရဲထဲကို ရောက်လာကြမှာဘဲလို့ အချုပ်ခံနေရတဲ့
တကယ်ဆိုရင် ယခုအသက်ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့လူသားတွေဟာ သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်လက်ခံရင် ငရဲနှင့်လွတ်ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်အပြစ်မှလည်းလွတ်ပြီး ဘုရားသခင်၏
ဒါကြောင့်လောကမှာယခုအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ ချစ်သောမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ မာရ်နတ်ရဲ့စကားကိုမယုံ
စွာခံစားနေရပါတယ်။ တနေ့မှာကျွန်တော်ဖေဖေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးမိတယ်။ အဲဒီအခါကျွန်တော်က ဖေဖေလောကမှာ
နေစဉ်က ဘုရားသခင်စကားကိုဖေဖေဘာကြောင့် မယုံကြည်ခဲ့သလဲ။ငရဲသိုမရောက်ရအောင်သားတို့ကိုဘာဖြစ်
လို့မပြောပြ၊မသွန်သင်ခဲ့သလဲ လို့မကျေမနပ်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါကဖေဖေက သားရေဖေဖေမှားပါပြီ
ဖေဖေမှားပါပြီ လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောကြားခဲ့တယ်။ယခုလိုငရဲရောက်မှမှားမှန်းသိတော့အပိုပါဘဲ။ ယခုအချိန်ကျမှ
ဒါကြောင့် ချစ်သောမိတ်ဆွေ……..သင့်အသက်တာကို သင်သတိပြုလျက်ပြင်ဆင်အသက်ရှင်ပါ။
ကျွန်တော်က ဖေဖေကိုမုန်းတယ်၊မေမေကိုမုန်းတယ် လို့ပြောမိပါတယ်။ ငရဲသို့မရောက်ရအောင် ကျွန်တော့်ကိုလမ်းပြသွန်သင်မူမပြုခဲ့တဲ့မိဘတွေအပေါ် ကျွန်တော်အရမ်းဒေါသထွက်မိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချစ်သောမိဘများခင်ဗျား……မိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုငရဲသို့မရောက်ရအောင် ဘုရားသခင်
ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သမ္ပာကျမ်းစာအတိုင်း လမ်းပြသွန်သင်ကြပါလို့ ကျွန်တော်တောင်းပန်လိုပါတယ်။အပြစ်
ဒဏ်ခံရာ ဤအပယ်ငရဲသို့မရောက်ရအောင် လမ်းပြသွန်သင်ခြင်းမပြုတဲ့မိဘတွေနဲ့ လမ်းလွဲအောင်ဟောပြော
ဘယ်လောက်ကြာအောင် ကျွန်တော်ဆက်ခံရမလဲလို့ညီးပြုအော်ဟစ်မိတယ်။အဲဒီအခါ ထာဝရ…ထာဝရအစဉ်
အမြဲ ဘဲလို့အဝေးတနေရာက နတ်ဆိုးတပါးရဲ့ဖြေကြားသံကို ကျွန်တော်ကြားရတယ်။
ရေတခွက်လောက်သောက်ပါရစေ လို့လူတယောက်ကအော်ဟစ်တောင်းခံတဲ့အခါ ဘယ်တော့မှမ
သောက်ရဘူး ဘယ်တော့မှမသောက်ရဘူး လို့နတ်ဆိုးတပါးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်
ခြင်းကျေးဇူးကို လက်မခံသူတွေဟာ ကမ္ဘာအဆက်ဆက်နေ့ညမပြတ်သက်သာရာမရကြလို့ သမ္မာကျမ်းစာရဲ့
များစွာလည်း ရှိနေပါတယ်။ခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို အရက်သောက်ပြီးမေ့ပျောက်လိုတဲ့အရက်သမားတွေ
လူ့လောကမှာအသက်ရှင်စဉ်တုန်းက ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ဘဲ ကဲ့ရဲ့ကျောခိုင်းသူတွေဟာ ငရဲထဲ
ရောက်တော့မှမ်ိမိတို့မှားမှန်းသိကြတယ်။ ဒီငရဲထဲမှာ ပညာတတ်ပုဂ္ဂုလ်တွေ၊ ပညာမဲ့တွေ၊သူဋ္ဌေးတွေ၊ဆင်းရဲ
ကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိရင် ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ်ငရဲထဲရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်
တော် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့သတိပေးစကားကို သူတို့အခုမှလက်ခံသဘောပေါက်သွားကြတယ်။
ဒါကြောင့် ချစ်သောမိတ်ဆွေ…….သင်လည်းနောင်တမလွန်မှာငရဲနဲ့လွတ်ဖို့ သင့်ဘ၀ကိုယခုကတည်း စစ်ဆေး
တွေကိုယုံကြည်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ အလွန်နောက်ကျသွားပါပြီ။ ငရဲထဲမှာနောင်တရပြီး မိမိအသက်တာကိုပြန်
ခြင်း၊ဘုရားကျောင်းမှန်မှန်တက်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ကြောင်း၊ငရဲမှမလွတ်နိုင်ကြောင်း၊ ငရဲထဲရောက်မှသူတို့သဘောပေါက်နားလည်လာကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ …..နောက်ကျသွားပါပြီ။အဲဒီလူတွေဟာ
ငရဲကလွတ်အောင် ဘာသာရေးပုဂ္ဂိလ်၊ ဂိုဏ်ကဏနဲ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေကမကယ်တင်မစွမ်း
ဆောင်ပေးနိုင်ပါ။မိဘနှစ်ပါးကသခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက် စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့
(အမည်ခံခရစ်ယာန်ဖြစ်ရင်) အဲဒီသားသမီးတွေဟာ ငရဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ယုံကြည်လျှေက်လှမ်းတဲ့ အသက်တာလမ်းအတိုင်းမိမိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရူခရစ်တော်ရဲ့ အသွေးတော်ကသာ အပြစ်ဖြေလွတ်ပေးသောကြောင့် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေသာငရဲနှင့်လွတ်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ရောက်မယ် လို့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်ကအတိအကျပြောထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာငရဲရောက်နေတာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာနေပါပြီ။နှုတ်နဲ့ပြောပြလို့မကုန်နိုင်လောက်တဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာတွေကို ပြင်းထန်စွာနေ့စဉ်ရက်ဆက်၊အချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းမှာ ကျွန်တော်ခံစားရနေရပါတယ်။
နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာဆက်ပြီး ခံစားရဖို့လည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီငရဲထဲမှာ မီးလောင်ခံရခြင်း၊ဆာလောင်
မွတ်သိပ်ခြင်း၊ရေငတ်ခြင်းတွေအပြင် သန်းပေါင်းများစွာသောပိုးလောက်ကောင်တွေက ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်တ
ခုလုံးကို ကိုက်စားထိုးဖောက်ကြပါသေးတယ်၊နည်းနည်းလေးမှသက်သာမူမရပါ။ ဒီငရဲဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့
နောက်ဆုံးတရားစီရင်ရာနေ့အထိ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်တဲ့ လူတွေအားလုံးကိုချုပ်နှောင်တဲ့အ
သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိသူများအားလုံးကိုပလ္လင်ဖြူကြီးမှာတရားစီရင်ပြီးမှ ထာဝရမီးလောင်ကျွမ်းရာငရဲထဲပစ်ချခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပလ္လင်ဖြူကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတရားစိရင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်ကင်းစင်ပေမဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေရဲ့အပြစ်တွေအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်
သူက ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သနားလို့ ကျွန်တော်တို့ခံရမဲ့အပြစ်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားအ
သေခံပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေက သူ့စကားကိုနားမထောင်ကြဘူး။ သူ့ကို ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။
တစ်နေ့ပလ္လင်ဖြူကြီးရှေ့ရောက်ရင် သူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတဲ့လူသားအားလုံးဟာ သူကိုဒူးထောက်ရှစ်ခိုး
ကြရလိမ့်မယ်။ သခင်ယေရူခရစ်တော်ဟာဘုရားဖြစ်ကြောင်း ထိုသူအားလုံးတို့နှုတ်က၀န်ခံရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့
ငရဲမီးအိုင်ဟာ ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားပုန်ကန်တဲ့ မာရ်နတ်နဲ့သူ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးတွေ၊၀ိညာဉ်ဆိုးတွေ
ငရဲထဲရောက်၇င် ဒုက္ခဝေဒနာမျိုးစုံကိုသေချင်လောက်အောင်နာကျင်စွာအဆက်မပြတ် အစဉ်အမြဲခံစား
ကြရပါလိမ့်မယ်။သေချင်ပေမဲ့ မသေနိုင်ပါဘူး။ ငရဲမီးအိုင်ဟာသခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်လက်ခံ
ခြင်းမရှိသောလူတွေ ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုခံရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ…….
သင်လည်းငရဲထဲရောက်ရင် ဒီအတိုင်းဘဲခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိနေတဲ့ ယခုအချိန်
ကျွန်တော့်ကို အပြစ်ဒုစရိုက်ထဲနစ်မျောစေပြီး ဘုရားတရားသိအောင်လမ်းညွန်မပေးခဲ့တဲ့ မိဘတွေကို
အပြစ်တင်မိတယ်။ဒေါသထွက်မိတယ်။ အကယ်၍မိဘတွေကသာ ကျွန်တော့်ကိုဘုရားတရားသိအောင်
သွန်သင်ညွန်ပြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်အားကိုးမှာပေါ့၊ကျွန်တော်တို့ညီအကို
အားလုံး လည်း ဒီငရဲရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့အခုတော့မိဘတွေက ဘုရားတရားကိုလျစ်လျူရူထားပြီး သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာဘဲ အချိန်ကုန်နေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ညီအကိုတွေကိုကျတော့ ဘုရားတရားသိအောင်မသွန်သင်မညွန်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ညီအကိုအားလုံးဟာမိဘနှစ်ပါးစလုံးအပေါ်အခဲမကြေဒေါသထွက်မိကြတယ်။ ဒါကြောင့်
ချစ်မိတ်ဆွေ…..သင်လည်းသင့်ရဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအထဲမှာဘဲ အချိန်ကုန်မနေပါနဲ့။ သင့်ရဲ့နောင်တမလွန်
အကြောင်း မပြောပြတတ်တော့ သားသမီးတွေရှိရင် ကျွန်တော်ဟာသူတို့ကိုငရဲထဲရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့နံပါတ်
တစ် တရားခံဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ယခုငရဲထဲကိုရောက်နေရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်
တိုင်ပါဘဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သခင်ယေရူကိုယုံကြည်လက်ခံကိုးစားခြင်းမရှိခဲ့လို့ပါ။
ပါနဲ့။ကိုယ့်အပြစ်ကိုနောင်တရပြီး အပြစ်လွတ်ပိုင်တဲ့ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပါ။
တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ချစ်သောမိတ်ဆွေတို့ အချိန်မှီနောင်တရကြပါ။
ညှင်းဆဲခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ငရဲမီးဟာဒီလောက်ပြင်းထန်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မထင်ခဲ့မိဘူး
ကျွန်တော်ဒီငရဲထဲရောက်ပြီးမှ နောင်တမလွန်ဘ၀ရှိကြောင်း၊ငရဲရှိကြောင်း၊ ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရူ
ခရစ်တော်ဘုရားရှိကြောင်း သိမြင်လာပြီးမိမိကိုယ်ကို ခွင့်မလွတ်နိုင်အောင် ယူကျုံးမရဖြစ်ရတယ်။နောင်တမ
လွန်ဘ၀အတွက် ကြိုတင်မပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အမှားမျိုးချစ်မိတ်ဆွေတို့မဖြစ်ဖို့ အချိန်မှီနောင်တရကြပါ။
မာရ်နတ်ဟာ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူ သူခိုး လူသတ်သမားဖြစ်တယ်။သူပြောသောစကားကိုမယုံကြပါနဲ့။
ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါ။ မာရ်နတ်ကိုကျောခိုင်းပြီး ဘုရားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်ကြပါ။ ကယ်တင်
ခြင်းမရခင်သေဆုံးသွားရင် သင်ဟာငရဲထဲမှာ ပြစ်ဒဏ်ထာဝရခံရမယ်ဆိုတာ ဆင်ခြင်ပြီးအချိန်မှီနောင်တရပါ။
မိဘများခင်ဗျား…..သားသမီးတွေကို ဘုရားတရားအကြောင်းမသွန်သင်တဲ့ ကျွန်တော့်မိဘလိုမျိုးမဖြစ်ပါ
စေနဲ့။ သားသမီးတွေကို ကယ်တင်သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံအားကိုးလာအောင်သွန်သင်လမ်း
ပြဖို့မိဘတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။သားသမီးတွေကို ဘုရားတရားသိအောင် ကယ်တင်ခြင်းခံစားရအောင် သွန်သင်လမ်းပြပေးခြင်းဟာမိဘတွေရဲ့အကောင်းဆုံး အမွေအနှစ်နဲ့အရေးအကြီးဆုံးတာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောတာကို ယုံကြည်စွာဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါ။ မယုံကြည်ရင်တော့ သင့်ဟာသေသေပြီးခြင်း တစ်မိနှစ်အတွင်းကျွန်တော်ပြောသမျှကို သင်လက်တွေ့သိမြင်ယုံကြည်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ကြမှနောင်
ဒါကြောင့် ချစ်သောမိတ်ဆွေ…….သင်ယခုအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ သင့်ရဲ့နောင်တမလွန်အရေးကိုစဉ်းစားပါ။
သင့်အသက်တာကို အဓိပ္ပါယ်ရှိစွာလျှောက်လှမ်းအသက်ရှင်ပါ။သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို သင့်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်
စိတ်နှလုံးထဲမှာ ယုံကြည်လက်ခံပြီး ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားအတိုင်း အသက်တာကိုလျှောက်လှမ်းပါ…ချစ်မိတ်ဆွေ။
ဒုက္ခတွေဟာအင်မတန်ပြင်းထန်ပြီး ကြောက်စရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ငရဲထဲရောက်ပြီးရင်လည်း ပြန်လာလို့
မရဘဲ အဲဒီမှာထာဝစဉ် အမြဲနေရမယ်လို့ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်ကအတိအကျပြောထားပါတယ်။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ…….သင်ငရဲထဲသွားချင်ပါသလား။
ချစ်သောမိတ်ဆွေ…..သင်ယခု အသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့ဤလောကကြီးထဲမှာရှိသမျှ သက်ရှိသက်မဲ့
အခိုးအငွေ့လိုပါပဲ။ယခုအသက်ရှင်လျက်ရှိနေပေမယ့် မနက်ဖြန်ကျရင် အသက်ရှင်လျက်ရှိချင်မှရှိနိုင်မယ်။ဒီအ
ထဲမှာ မိတ်ဆွေလည်းပါတယ်ဆိုတာသတိပြုမိရဲ့လား။အိုခြင်း နာခြင်းနဲ့သေခြင်းတွေကို မိတ်ဆွေမလွန်ဆန်နိုင်
ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေ သင့်ဘ၀ကို သင်သတိပြုပါ။ လူသားတိုင်းဘယ်အချိန်သေရမယ်ဆိုတာ အတိအကျမ
သိနိုင်ပေမယ့်သေချာတဲ့အချက်ကတော့ မည်သူမဆို တစ်နေ့တော့သေရမယ်ဆိုတာပါပဲ။အဲဒီလိုသေသွားပြီးတဲ့
နောက်ပိုင်းမှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုရော သင်သိရဲ့လား။
ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာတော့သေသွားပြီးတဲ့လူတိုင်းငရဲ၊ ဒါမှမဟုတ်
ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုခုကိုသွားရမယ်လို့ အတိအကျပြောထားပါတယ်။ ချစ်မိတ်ဆွေ…
အချို့က…မိမိရဲ့နောင်တမလွန်ရေးအတွက် စဉ်းစားဖို့နေနေသာသာ ဘုရားဆိုတာ မရှိဘူးလို့ပြောကြပါ
တယ်။မိမိသွေးသားတပ်မက်မူဖြင့် ဘုရားမဲ့စရိုက်နဲ့ မိမိထင်ရာ၊မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလိုအသက်ရှင်ကြပါတယ်။
မိတ်ဆွေ…တကယ်တော့ဘုရားဆိုတာရှိပါတယ်။ ဘုရားရှိကြောင်းကို သိပ္ပံနည်းနဲ့တော့ သက်သေမပြနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ချစ်မိတ်ဆွေ..သင်နေ့တိုင်းထမင်းချက်စားနေတဲ့ အိုးကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီအိုးကိုပြုလုပ်တဲ့သူမရှိရင် သင်ဟာအဲဒီအိုးနဲ့ ထမင်းချက်စားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအိုးကိုပြုလုပ်တဲ့သူရှိလို့သင်ဟာအဲဒီအိုးဝယ်ပြီး ထမင်းချက်စားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်…ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ ပြုလုပ်တဲ့သူမရှိရင် သူ့အလိုလိုတော့ဖြစ်မလာပါဘူး။
ပြုလုပ်တဲ့သူရှိလို့ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ….ေ၇၊မြေ၊တော တောင် ပင်လယ်၊
သမုဒ္ဒရာ၊သစ်ပင်၊ပန်းပင်၊လူတွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့အရားအားလုံးကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီအရာတွေကိုပြုလုပ်တဲ့သူ ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဆိုတာရှိကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။
ဘုရားဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်တဲ့ အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာတော့ အတိ
အကျ ဖေါပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးဘုရားဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တစ်ဆူတည်းပဲရှိရမယ်။တန်ခိုးနဲ့ပြည်ဝရမယ်။
စုံလင်ရမယ်။ဖန်ဆင်းနိုင်ရမယ်။သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်ရမယ်။ လူသားတွေနဲ့ နောင်တမလွန်ရေးကို အမခံချက်ပေး
တာရှိကြောင်း မိတ်ဆွေသိပြီးဆိုရင် ဆက်လက်ဖတ်ပါမိတ်ဆွေ။
ဤလောကကြီးထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းဟာ ယခုဘ၀၊နောင်ဘ၀စိတ်ချမ်းသာ
ခြင်း၊သေရည်သေရက် သောက်သုံးခြင်း၊မိမိတပ်မက်မူအတိုင်းကျင့်ကြံပြုမူခြင်းတွေနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမူကိုရှာဖွေကြ
တယ်။ အဲ….နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီအရာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ချမ်းသာမူကို ခေတ္တခဏသာပေးနိုင်ပြီး အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ သူတို့ကို ရောဂါဆိုးအမျိုးမျိုးဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အူမတောင့်မှသီလစောင့်မယ်၊ ဆိုပြီး ယခုဘ၀ကိုဦးစားပေးကြတယ်။ နောက်ဘ၀အရေးကို အလေးမထား မစဉ်းစားကြဘူး။ရှာဖွေတယ်၊စုဆောင်းတယ်၊ မကျေနပ်သေးဘူး။သြော်…ဒါငါ့သားသမီးအ
တွက်၊ဒါငါ့မြေးအတွက်…..ဒါကတော့ငါ့ဘ၀ ရှေ့ရေးအတွက်ဆိုပြီးဒီလိုနဲ့ပဲအတောမသတ်နိုင်ဘူး။ လောဘမသတ်နိုင်ကြ ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ရလေလိုလေ၊အိုတစ္ဆေ ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာလေလေ၊ထပ်ပြီးလိုချင်လေလေပဲ
မဟုတ်ဘူးလား။တကယ်တော့အတတ်ပညာတွေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာ စစ်မှန်တဲ့ စိတ်ငြိမ်သက်ချမ်းသာမူကိုမ
ပေးနိုင်ပါဘူး….မိတ်ဆွေ။ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့၊ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှအားလုံးဟာ
လည်းမိမိရဲ့နောင်တမလွန်ရေးအတွက် အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီးအဲဒီပိုင်ဆိုင်ထားသမျှအရာတွေ
အားလုံးကိုလည်း နောင်တမလွန်ဆီကို ယူသွားလို့မရပါဘူးမိတ်ဆွေ။သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်က သင်တို့သည် ဤလောကသို့အဘယ်အရာမျှမပါဘဲ လာသည်ဖြစ်၍ ထွက်သွားလျှင်လည်း အဘယ်အရာကိုမျှ
တချို့ကတော့ လောကအသက်တာမှာကောင်းကောင်းစား၊ကောင်းကောင်းဝတ်ပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာစွာ စည်းစိမ်ခံစားနိုင်ဖို့ ငွေကြေးတွေ၊စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို ကြိုးစားရှာဖွေကြတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားရှာဖွေရင်း သူတို့ရဲ့
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပဲ အချိန်တွေကုန်နေတယ်။သူတို့ရဲ့ဘ၀ဟာ အလုပ်ထဲမှာပဲ နစ်မွန်းနေတယ်။
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ပဲ ရှာဖွေလုံးပန်းရင်း အသက်ဝိညာဉ်ရေး (နောင်တမလွန်ရေး)ကို
မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် အလုပ်များနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထက် အခြားဘယ်အရာကို
မျှ ဦးစားမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
သင်လည်းပါနေမယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေကိုမေတ္တာနဲ့သတိပေးပါရစေ။တိုတောင်းလွန်းတဲ့ ဤလောကအသက်တာ
မှာ မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းအသက်ရှင် နေထိုင်စားသောက်သွားလာရတယ်ပဲထားဦး၊ သေသွားပြီးတဲ့
နောက် နောင်တမလွန်ဘ၀မှာကြတော့မိတ်ဆွေဟာငရဲထဲရောက်မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ဘ၀ဟာ အင်မတန်
တချို့ကြပြန်တော့….လူ့ဘ၀ဟာတိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ရတဲ့ယခုအချိန်လေးမှာ ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နေထိုင်စားသောက်ရရင် ပြီးတာပဲကွာ။ငရဲတွေ ကောင်းကင်နိုင်ငံတွေ နောင်တမလွန်ရေး
တွေ အကြောင်းကိုစိတ်အရူပ်ခံ အချိန်အကုန်ခံစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူး….လို့ပြောကြပါတယ်။ နောင်တမလွန်ရေးကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘော ထားကြပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ဆဆအသက်ရှင်ကြတယ်။၀မ်းနည်းစရာကောင်းလေစွ။ယခု
ဘ၀မှာရွှေတွေ ငွေတွေစည်းစ်ိမ်ဥစ္စာတွေကိုဘယ်လောက်ပဲပိုင်ဆိုင် ချမ်းသာနေပါလေ့စေ။တိုက်တွေ၊ ကားတွေ၊
သင်္ဘောတွေ ၊လယ်ယာတွေ၊ ခြံတေ၊ွ ငါးမွေးကန်တေ၊ွ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးစုံနဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ရာထူးတွေ၊ ဘွဲ့တွေ၊ ဘယ်လောက်ပဲပိုင်ဆိုင်နေပါလေ့စေ။
ဘူးဆိုရင်တော့၊ယခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အရာအားလုံးနဲ့ပျော်ရွှင်မူတွေဟာအလကားပါပဲမိတ်ဆွေ။ ဒါကြောင့် ယခု
ဘ၀မှာငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ နေထိုင်စားသောက်ရပြီး နောင်တမလွန်မှာလည်း ငရဲနှင့်သေချာပေါက်
တချို့က…..ငါတို့ကတော့ကွာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ပြီး ရှာဖွေစားသောက်
နေရတာ၊ စားဝတ်နေရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ ၊ငရဲတို့ နောင်တမလွန်အရေး
ယခုအချိန်မှာ ဒါတွေစဉ်းစားဖို့မလိုသေးပါဘူး။ အချန်တွေအ
ကယခုအချိန်မှာအရေးမကြီးပါဘူး။ ငွေကြေးပြည့်စုံလာတော့မှပဲ၊ဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးရင့်အိုမင်းလာတော့မှပဲ ဘုရား၊တရားလိုက်စားကြတာပေါ့။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့၊ ငရဲတို့၊ နောင်တမလွန်ရေးတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြ
တာပေါ့။ ယခုတော့စားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်ကိုပဲ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုက်ဦးမယ်…..လို့ဆိုတတ်ကြပြန်ပါ
တယ်။အလုပ်မလုပ်ဘဲ ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့၊ ငရဲတို့၊ နောင်တမလွန်ရေးတို့အကြောင်းစဉ်းစားစေလိုခြင်းမျိုးမ
အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း တစ်ဖက်ကလည်းနောင်တမလွန်မှာ ငရဲနှင့်လွတ်ဖို့အ
တွက် နောင်ရေးစိတ်အေးရအောင် သတိပေးနေရခြင်းပါ။ယခုဘ၀မှာလည်းဆင်းဆင်းရဲရဲချို့ချို့တဲ့တဲ့နဲ့ နေထိုင်
စားသောက်ရပြီး တမလွန်ဘ၀ကြပြန်တော့ လဲငရဲကျမယ်ဆိုရင်မလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့နောင်တမလွန်
ဘ၀ကို ငရဲနဲ့သေချာပေါက်လွတ်အောင်ယခု ကတည်းကပြုလုပ်ဖို့မေတ္တာနဲ့သတိပေးနေရတာပါမိတ်ဆွေ။
ချစ်သောမိတ်ဆွေ….သင်ဟာ နေထိုင်စားသောက်၊၀တ်ဆင်ဖို့အတွက် ရှာဖွေလုံးပမ်းရင်း သင့်ရဲ့အချိန်
တွေကုန်နေပါသလား။သင်ဟာဤလောကမှာ ထာဝစဉ်နေရမယ်လို့ ထင်နေပါလား။
တစ်နေ့ကျဤလောကမှသင်ဧကန်အမှန်ထွက်ခွာသွားရမယ်ဆိုတာကို သင်သတိပြုပါ။ အဲဒီလိုထွက်ခွာသွားတဲ့အခါသင် သွားရမယ့်နေရာကို ယခုကတည်းက အတိအကျသိထားဖို့လိုပါတယ်။ နေထိုင် စားသောက် ၀တ်ဆင်ဖို့နဲ့ သင့်ရဲ့ဘ၀လိုအပ်မူ
များအတွက် ကြိုးစားရှာဖွေရင်း တစ်ဖက်က လည်းသင့်ရဲ့နောင်တမလွန်ရေးစိတ်အေးရေးရအောင်ပြုလုပ်ပါ……..
မိတ်ဆွေ။နောက်ပြီးမိတ်ဆွေဟာ ဤလောကမှ ထွက်ခွာသွားရမယ့်အချိန်ကို မသိတဲ့အတွက် အချိန်ကိုမဆွဲဘဲ
ယခုအချိန်ရှိတုန်း မိတ်ဆွေရဲ့နောင်တမလွန်ရေးအတွက် အလေးအနက်ထားစဉ်းစားပြီးလုပ်သင့်တာကိုလုပ်ပါ
တချို့ကတော့ ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့နေရာ ရောက်မယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတဲ့နေ
ရာရောက်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ချစ်သောမိတ်ဆွေ သင့်ရဲ့ဘ၀အသက်တာမှာလည်းကောင်းတာ
လုပ်တာနဲ့ မကောင်းတာလုပ်တာ ဘယ်ဟာကိုကပိုများနေသလဲလို့ပြန်စဉ်းစားကြည်ပါ။ကိုယ်ထိလက်ရောက်
ကျူးလွန်းခြင်း၊နှုတ်နဲ့ကျူးလွန်ခြင်း၊စိတ်နဲ့ကျူးလွန်ခြင်းတွေကို မိတ်ဆွေထိန်းနိုင်ရဲ့လား။ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းနဲ့ နှုတ်နဲ့ကျူးလွန်ခြင်းတွေကိုမိတ်ဆွေ ထိန်းနိုင်
တယ်ပဲထားဦး သူတစ်ပါးကိုစိတ်နဲ့ကတော့မလွဲမသွေ ပြစ်မှားကျူးလွန်မိမှာသေချာတယ်။ အဲဒီလိုပြစ်မှားကျူး
လွန်မိတာနဲ့တပြိုင်တည်း မိတ်ဆွေမှာအပြစ်ရှိနေပြီး၊မကောင်းတာလုပ်နေပြီဆိုတာသတိပြုပါ။ အဲဒါကြောင့်
နှုတ်နဲ့ကျူးလွန်ခြင်းစတဲ့ မကောင်းမူအကုသိုလ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ်၊ကောင်းမူကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရင်
အတိုင်းမိတ်ဆွေလုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းမူကုသိုလ်က နည်းနည်းလေးဖြစ်နေပြီး မကောင်းမူအကုသိုလ်တွေက
အဆမတန်များလွန်းနေတာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေလုပ်လိုက်တဲ့
ကောင်းမူကုသိုလ်ဟာ မိတ်ဆွေရဲ့နောင်တမလွန်ရေးအတွက် အာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူး။
အချို့ကတော့…အကျင့်သီလ၊ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို ကြိုးစားလိုက်လျှေက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်
နောက်ဆုံးတော့လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲကျူးလွန်ကြတယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်
ကျူးလွန်ခြင်း၊နှုတ်နဲ့ကျူးလွန်ခြင်း၊စိတ်နဲ့ကျူးလွန်ခြင်းတွေကို ကျူးလွန်ကာအကျင့်သီလ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ
အချို့ကတော့..နောင်တမလွန်မှာ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့ဘာသာတရားကို အလေးထားလိုက်စား
ကြပါတယ်။ ဘာသာတရားမှာပါတဲ့သွန်သင်မူပညတ်တရားတေါကို လိုက်လျှောက်ကြတယ်။
သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်…..ဘာသာတရားပါတဲ့ ပညတ်တစ်ပါးကိုချိုးဖောက်မိရင်ပညတ်တရားအားလုံး
ကိုချိုးဖောက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အတွက် ပညတ်တရားအားလုံးကလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့ ဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်ပါ
ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမလိုက်လျှောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဟာလည်း နောင်တမလွန်ရေးအတွက်
အချို့ကတော့…..ပြောကြတယ်။ငယ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့ပထမ အရွယ်မှာပညာရှာ ။ အရွယ်ရောက်ကြီး
ပြင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာ။ အသက်ကြီးရင့်အိုမင်းလာပြီတဲ့ တတိယအရွယ်မှာတရားရှာတဲ့ ၊
ဘုရားတရားလိုက်စားတဲ့။ ဒါလဲ…သိပ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါဘဲမိတ်ဆွေ။ အဲဒါပေမယ့် အထူးသတိပြုစရာ
အချက်တစ်ချက်ကတော့ အစီအစဉ်အတိုင်းမဖြစ်ဘဲ၊ ပထမအရွယ်ဖြစ်တဲ့ပညာရှာတဲ့အရွယ်မှာသေသွားခဲ့ရင်
ပညာရှာတဲ့အရွယ်မှာနဲ့ ဥစ္စာရှာတဲ့အရွယ်မှာသေသွားတဲ့လူတွေအတွက်သွားရာလမ်းဟာလည်း တရားမရှာရသေးတဲ့
အတွက် ဘုရားတရားမလိုက်စားရသေးတဲ့အတွက် ငရဲပဲသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သေသေချာချာစဉ်းစားပါ
မိတ်ဆွေ။ သင့်ရဲ့ဘ၀ကို သင်သတိပြုပါ။
မှာ အတိအကျမသိဘဲနောင်တမလွန်ကျမှသိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အသက်ရှင်မူမျိုးဟာလည်း အလွန်အန္တရာယ်
များပါတယ်။ နောင်တမလွန်ဘ၀ရောက်သွားမှ ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားရမယ်ဆိုရင်တော့တော်ပါရဲ့၊အကယ်၍
ငရဲသွားရမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ပါဘူး ထိုအချိန်ရောက်မှငရဲသို့မသွားရအောင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလုပ်လို့ရတော့
သေချာပေါက်လွတ်ဖို့ယခုကတည်းကသေချာနေပြီဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။လောကလူသားတွေဟာ ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ မိမိတို့ရဲ့အတွေးအခေါ် အယူအဆများ၊မိမိတို့ရဲ့ဘာသာရေးကျင့်ထုံးများ၊ကောင်းမူ
ကုသိုလ်၊အလှူဒါနများ၊အကျင့်သီလ၊ကိုယ်ကျင့်တရားများအားဖြင့် ကြိုးစားလျက်ရှိနေကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး
ငရဲဆိုတဲ့နေရာကိုတော့ ဘယ်သူမှသွားချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိတ်ဆွေလည်း သွားချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မိတ်ဆွေရဲ့တမလွန်ဘ၀အတွက်စိတ်ချမူရှိပြီလား။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘ၀ကိုကိုယ်ပြန်စဉ်းစားစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ငါသေရင်ဘယ်ရောက်မလဲ၊ငရဲလား ၊ဒါမှမဟုတ် အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊သေခြင်းကင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုလား
ဆိုတာကို သေသေချာချာစဉ်းစားစစ်ဆေးပါမိတ်ဆွေ။ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့နောင်တမလွန်ဘ၀မှာ ငရဲနှင့်လွတ်ဖို့မလွတ်ဖို့ဆိုတာ မိတ်ဆွေရဲ့ယခုယုံကြည်လက်ခံလျှောက်လှမ်းနေတဲ့အသက်တာလမ်းအပေါ်မှာ
လူဟာသူတစ်ပါးကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်အပြစ်မကျူးလွန်မိအောင် နှုတ်နဲ့မပြစ်မှားမိအောင်
စောင့်ထိန်းလို့ရကောင်းရပေမဲ့ စိတ်နဲ့မပြစ်မှားမိအောင်တော့ ဘယ်သူမှရှောင်ကွင်းလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အပြစ်နဲ့မကင်းနိုင်တဲ့အပြစ်သားတွေချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြစ်သားဆိုရင် ကောင်းကင်
လူတွေဟာ မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကစပြီး ယနေ့အထိလူသိအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊လူမသိအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
သေခြင်းပေတည်း…လို့ အတိအကျပြောထားပါတယ်။ သေခြင်းဆိုတာခန္ဓာကိုယ်သေခြင်းတင်မက ၀ိညာဉ်ပါပျက်စီးဆုံးရူံးမှာကို ဆိုလိုပါတယ်။
လူသားတွေဟာ အပြစ်မကျူးလွန်မိအောင် လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟမရှိအောင် ကြိုးစားချုပ်တည်းကြပေ
မယ့်မရဘူး၊အပြစ်လုပ်မိကြတယ်။လောကမှာအပြစ်နဲ့ကင်းအောင် နေနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူသားတိုင်းဟာအပြစ်နဲ့မကင်းသူတွေချည်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ငရဲနှင့်လွတ်ဖို့မိမိကိုယ်မိမိ မကယ်တင်
နိုင်ကြောင်းထင်ရှားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူသားတိုင်း ငရဲနှင့်လွတ်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကယ်တင်ရှင်
လူသားတိုင်းအတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်း တစ်ခုကတော့ လူသားအားလုံးနောင်တမလွန်
ဘုရားသခင်ဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းငရဲနှင့် လွတ်ရန်အတွက်သီးသန့်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ
ပေါ်ရှိလူမျိုးပေါင်းစုံမှာပါဝင်တဲ့လူသားအားလုံး ငရဲနှင့်လွတ်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူသားအား
ဘုရားသခင်ဟာလူသားတွေကိုငရဲမှ ကယ်တင်ဖို့သူ့ရဲ့တစ်ပါးတည်းသောသားတော်သခင်ယေရူ ခရစ်
တော်ကို လူသားအဖြစ် ဤလောကသို့စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်.။အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ လူတွေကို ကယ်တင်ဖို့
ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဘုရားသခင်၏သားတော်သခင်ယေရူ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ငရဲသို့မရောက်၊ ထာဝရ
အသက်ကိုရစေခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည်မိမိမှာရှိတဲ့ တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်
အောင် လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။လောကီသားတို့အား အပြစ်စီရင်ခြင်းငှာ ဘုရားသခင်သည် သားတော်
ကိုဤလောကသို့စေလွတ်သည်မဟုတ်။လောကီသားတို့သည် သားတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရမည့်
အကြောင်း၊ငရဲနှင့်လွတ်ရမည့်အကြောင်းစေလွတ်တော်မူ၏။ သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည် အပြစ်စီရင်
ခြင်းကိုမခံရ။ ငရဲသို့မရောက်ရ….လို့ ဘုရားသခင်ကတိပေးထားပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ လူသားအားလုံးကို သိပ်ချစ်လို့သူ့ရဲ့တစ်ပါးတည်းသောသားတော် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေအတွက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေသတ်
ခြင်းခံစေခဲ့ပါတယ်။ သခင်ယေရူခရစ်တော်ဟာ လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်အတွက်အသေခံတယ်။ ဒါပေမယ့်
(၃)ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် ပြန်ရှင်လာသလဲဆိုရင် သခင်ယေရူခရစ်တော်
နောက်ပြီးသခင်ယေရူခရစ်တော်ဟာ မနေ့ ယနေ့ နောင်ကာလမပြောင်းလဲဘဲ ထာဝရ အသက်ရှင်
တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သောမိတ်ဆွေ….မိတ်ဆွေဟာသခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်
ရှင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေမှာရှိတဲ့ အပြစ်အားလုံး ဖြေလွတ်ခြင်းခံရမယ်လို့သမ္မာကျမ်းစာထဲ
မှာ အတိအကျဖေါ်ပြထားပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာ အဲဒီလိုအပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးမှ ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားနိုင်မှာ
မိတ်ဆွေဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိနေပါစေ၊ဘုရားသခင်ဟာ မိတ်ဆွေကိုချစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေငရဲထဲ
ကျမှာကိုလည်း ဘုရားသခင်ပူပန်နေပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ ယခုဘ၀အတွက်သာမကနောင်တမလွန်ရေးအတွက်
ပါ စိတ်အေးရအောင် ဘုရားသခင်ကအာမခံချက်ပေးလိုပါတယ် ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့ နောင်တမလွန်မှာ ငရဲမှ
လွတ်ဖို့မိတ်ဆွေရဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘ၀အတွက်သင် အလေးအနက်ထားစဉ်းစားပါ
မိတ်ဆွေ။ ယခုအချိန်ဟာ မိတ်ဆွေရဲ့ဘ၀အတွက်အလွန်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ပါပဲ။
ငရဲကလွတ်အောင် ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်၊ဂိုဏ်းဂဏနဲ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေက မကယ်တင်မစွမ်း
ဆောင်ပေးနိုင်ပါ။ မိဘနှစ်ပါးက သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ဘုရားသား
သမီးများဖြစ်ကြပေမဲ့၊သားသမီးတွေက သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိရင်
အပြစ်သားတွေအတွက် အသေခံခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်
လက်ခံသူဟာ အပြစ်များဖြေလွတ်ခြင်းခံရမည်။ နောင်တမလွန်မှာ ငရဲ့နှင့်သေချာပေါက်လွတ်လျက်
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်မည်လို့သမ္မာကျမ်စားထဲမှာ ဘုရားသခင်ကတိပေးထားပါတယ်။မိတ်ဆွေ
ဟာသခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံမှသာငရဲမှလွတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့လည်း
ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဟာ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်၊ ငရဲ
နှင့်သေချာပေါက်လွတ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်သူအဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံဖို့ လက်မခံဖို့ ဆိုတာကိုပြတ်ပြတ်သားသား
မိတ်ဆွေဟာဤလောကမှ ထွက်ခွာသွားရမယ့်အချိန်ကိုမသိတဲ့အတွက် ယခုပင် မိမိကိုယ်ကိုမိမိစဉ်းစား
ဒါကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ ယခုအချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကိုမိမိသေချာစစ်ဆေးလျက် တိကျပြတ်သားစွာစဉ်းစား
** သခင်ယေရူခရစ်တော်သည် ယခုဘ၀အတွက်သာမက နောင်တမလွန်ရေးအတွက်ပါ စိတ်အေးလိုသူတိုင်းအတွက် အာမခံချက်ပေးနေသည်။
** ငရဲနှင့်သေချာပေါက်လွတ်ပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်လိုသောသူတိုင်းသခင်ယေရူကို ယုံကြည်
ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်၊ငရဲနှင့်သေချာပေါက်လွတ်
ရာသို့ငါဝင်၍ သူနှင့်အတူစားသောက်မည်ဆိုတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေလဲ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်
နှလုံးတံခါးဖွင့်ပြီး၊ အကြွင်းမဲ့အုပ်စိုးခိုလှုံခွင့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ အဲ့ဒီအခါမှာသခင်ယေရူခရစ်တော်ဟာမိတ်ဆွေ
ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာ ၀င်ရောက်ကျိန်းဝပ်ပြီး အုပ်စိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်မိတ်ဆွေ၊ သင့်စိတ်နှလုံးထဲ သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုလက်ခံချင်သလား။ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်
သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုသင့်စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကျိန်းဝပ်ဖို့ခေါ်ဖိတ်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကျိန်းဝပ်ဖို့ခေါ်ဖိတ်လက်ခံရန်အသင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင် အောက်မှာပါတဲ့ဆုတောင်းချက်အတိုင်း အသံထွက်လျက်ရွတ်ဆိုဆုတောင်းခေါ်ဖိတ်ပါမိတ်ဆွေ။
ကောင်းမြတ်စုံလင်တော်မူ၍ အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်ရှင်သည်
သား/သမီးကိုအပြစ်ငရဲမှ ကယ်တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ သား/သမီးဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ
ပြုလုပ်မိခဲ့တဲ့ အပြစ်အားလုံးအတွက် ၀န်ချတောင်းပန်ပါ၏။ အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖြေလွှတ်တော်မူပါ။
ယခုအချိန်ကစပြီး သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရားသည် သား/သမီးရဲ့အပြစ်တွေအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်
ဖြင့် အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်လက်ခံပါပြီ။ ဒါကြောင့်သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရား သား/သမီးရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာ
ကျိန်းဝပ်၍ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သာမက အရှင်သခင်အဖြစ်လည်း အုပ်စိုး၍ လမ်းပြသွန်သင်တော်မူပါမည့်
အကြောင်း သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရား၏ နာမကိုအမှီပြု၍ဆုတောင်းခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါ၏။ အာမင်။
ယခုလိုမိတ်ဆွေရဲ့ စိတ်နှလုံးထဲ သခင်ယေရူခရစ်တော်ဘုရားကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံပြီးတဲ့ ယခုအချိန်က
စပြီးမိတ်ဆွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားပါပြီ။ မိတ်ဆွေဟာ ထာဝရအသက်ဆိုတဲ့ ကယ်တင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးတော် ငရဲနှင့်သေချာပေါက်လွတ်ပြီးဆိုတဲ့ အာမခံချက်ကိုလည်း ယခုအချိန်နာရီကစ၍
လွတ်တာတင်မကသေးဘူး ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ရောက်ဖို့လည်း ယခုအချိန်ကစ၍သေချာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော အနာဂါတ်ကို ပိုင်ဆိုင်သူအဖိုးတန်လူသားတစ်ယောက်
ချစ်သောမတ်ဆွေ…..သင်သည် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တပါးပါးနှင့် ဆက်သွယ်ပြီးထိုအသင်းတော်မှ
အသင်းအုပ်ဆရာအားသင်သည် သခင်ယေရူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပါ။ ထိုအသင်း
အုပ်ဆရာထံမှ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်း(နှစ်ခြင်းအင်္ဂလာခံယူခြင်း)အကြောင်းမေးမြန်းသင်ယူပါ။ သင်ယူပြီး
နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူရန်သင့်စိတ်နှလုံးတွင်ဖြစ်ပေါ်ပါက ထိုအသင်းအုပ်ဆရာနှင့်တိုင်ပင်ကာ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကို
ခံယူပါ။နှစ်ခြင်းမင်္ဂခံခြင်းသည် လူရှေ့ဘုရားရှေ့တွင်သင်သည်သခင်ယေရူခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံပြီး
ကိုအချိန်ပေး၍ မှန်မှန်ဖတ်ပါ။ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပါ။ ၀တ်ပြုအစည်းအဝေးများလည်းတက်ရောက်ပါ။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည့်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလျက် ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နှင့် သင့်အသက်
ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အရာခပ်သိမ်းအတွက်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကို ချီးမွမ်းပါ။ သင်၏အလုပ်များကိုဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်အပ်နှံပြီး ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားလျက် အလုပ်များကို
ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏စကားတော်အတိုင်း သင်ရရှိသောဝင်ငွေအားလုံးကို ဆယ်ဘို့တစ်ဘို့
(တစ်ဆယ်ရလျင် တစ်ကျပ်၊တစ်ရာရလျှင် တစ်ဆယ်ကျပ်) ဖယ်ကာ ဘုရားသခင်၏ အမူတော်မြတ်တွင်ပါဝင်ပါ။
ထိုအခါဘုရားသခင်သည် သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း သင်၏ခန္ဓာ၊စိတ်၊၀ိညာဉ်အပေါ် သင်၏
အလုပ်အကိုင်များအပေါ် သင်၏မိသားစုဝင်အားလုံးအပေါ် ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်တံခါးဖွင့်ပြီး
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာကျမ်းစာကို မှန်မှန်ဖတ်ရူပြီး ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို
အမြဲဆင်ခြင်အောက်မေ့ပါ။ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်များအတိုင်းလက်တွေ့အသက်ရှင်ပါ။
(၁တိ၊၂း၎) ကျမ်းပိုဒ်အရ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကလူအပေါင်း ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီး သမ္မာရားသိဖို့ဖြစ်တယ်....
“(မဿဲ၊၇း၂၁-၂၃)ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆုံးမသြ၀ါဒပေးသူ၊နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်သူ၊တန်ခိုးများစွာပြသူ တွေကိုတောင် ခရစ်တော်က ငါ့ထံမှဖယ်ကြလို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာဘုရားအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ၊ အမူတော်ဆောင်တွေ၊ကောင်းတာ လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့အဲဒီလို ဖြစ်ရသလဲဆိုရင် ခရစ်တော်အကြောင်းကိုသာသိပြီး ခရစ်တော်နဲ့ သိကျွမ်းမူမရှိ လို့ပါပဲ(They know about Christ, but they do not know Christ per-sonally)”
ခရစ်တော်ကို သိကျွမ်းဖို့၊ ကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့ရန်အဓိကအချက်(၃)ချက်ရှိပါတယ်။ဒဲ့ဒါကိုတရား(၃)ပါး
(၁ယော၊၃း၎) မှာ ပညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်း လို့ဖော်ပြပါတယ်။
အပြစ်ဟာ ဘယ်သူအားဖြင့် ဤလောကသို့ဝင်သလဲ
(ရော၊၅း၁၂) အရ-အာဒံအားဖြင့် ဤလော့ကသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အပြစ်တရား ဤလောကထဲဝင်ပြီးနောက် ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ
အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားဝင်ပြီး၊ လူအပေါင်း ဟာအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်သေခြင်သို့ရောက်ရပါတယ်။
(၁) ဗီဇအပြစ် (မွေးရာပါအပြစ်)
(၂) ဒုစရိုက်အပြစ် (ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်)
ဒုစရိုက်အပြစ်အကြောင်းကို အများအားဖြင့် သိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - သူများအသက်သတ်တာ၊သူများသားမယားပြစ်မှားတာ၊ ဒီအကြောင်းကို(ရောမ၊ ၁း၂၉-၃၁)မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
လူတော်တော်များများ မသိတဲ့အပြစ်ကတော့ ဗီဇအပြစ်(မွေးရာပါအပြစ်)ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ အပြစ်အကြောင်းမသိလို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရောက်မှာပေါ့ လို့ ခရစ်ယာန်တွေတောင် ပြောနေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆာလံဆရာက မွေးကတည်းက ဘာပါလာတယ်လို့ ပြောသလဲအပြစ်ပါလာတယ်
ဒီအပြစ် ဘယ်ကရလာသလဲ ... အာဒံ
အာဒံက ဘယ်သူ့ကိုပြစ်မှားသလဲ.... ဘုရားသခင်
ဒါကြောင့် အာဒံကတဆင့်ရလာတဲ့ အပြစ်ဟာ ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်၊
ကျွန်တော်တို့ဟာ အပြစ်လုပ်လို့ အပြစ်သားဖြစ်တာလား၊အပြစ်သားဖြစ်လို့ အပြစ်လုပ်တာလား
ခွေးတွေဟာ ဟောင်တတ်တယ်၊ ဟောင်လို့ခွေးဖြစ်တာလား၊ခွေးဖြစ်လို့ဟောင်တာလားခွေးဖြစ်လို့ဟောင် တာဖြစ်တယ်
ထိုနည်းတူ ကျွန်တော်တို့ဟာ အပြစ်သားဖြစ်လို့အပြစ်လုပ်တတ်ကြတယ်၊ ခွေးတွေကိုဟောင်နည်း
အဖေက ဗမာ၊အမေက ဗမာဆိုရင် မွေးတဲ့ကလေးဟာ ဘာဖြစ်မလဲ..... ဗမာပဲဖြစ်မယ်
အသားမဲလို့ကပ္ပလီလို့ခေါ်လို့မရဘူး၊အသားဖြူလို့လည်းအင်္ဂလိပ်လို့ ခေါ်လို့မရဘူး ဗမာဖြစ်ချင်လို့လည်း
မရဘူးဗမာစကား မပြောတတ်လည်းဗမာပဲ၊ ဗမာယဉ်ကျေးမူ ဓလေ့ထုံးတမ်းမလုပ်ရင်လည်းဗမာပဲ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗမာမိဘက မွေးဖွားခဲ့လို့ဘဲ
ထိုနည်းတူ အပြစ်သား အာဒံနဲ့အပြစ်သား ဧ၀ ကနေဆင်းသက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ အပြစ်သား
တွေပဲဖြစ်တယ်။မဖြစ်ချင်ခလည်း မရဘူး ဖြစ်ပြီးသားပဲ....
ခွေးဟာ မဟောင်ရင်လည်းခွေးပဲ၊ဟောင်ရင်လည်းခွေးပဲ ထိုနည်းတူ ကျွန်တော်တို့ဟာ အပြစ်မလုပ်တဲ့ အချိန်မှာ
လည်းအပြစ်သားပဲ၊ အပြစ်လုပ်လည်း အပြစ်သားပဲ....
မွေးစကလေးဟာ အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ အခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ စကားများပြီး ရန်ဖြစ်ကြတယ် ဆိုပါစို့။သူကအခြားသူကို တုတ်နဲ့ရိုက်တယ်၊အခြားသူက သူ့ကို ဓားနဲ့လိုက်ခုတ်တယ်၊အဲ့ဒါ ကောင်းသလား..... မကောင်းဘူး...
အဲဒါကို ဒုစရိုက်အပြစ်လို့ခေါ်တယ်၊လူလူချင်း ပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ် (ရော၊၃း၂၃)
အပြစ်ရှိတဲ့လူတိုင်း သေခြင်းမှာ လမ်းဆုံးကြရမယ်(ရောမ၊၆း၂၃) မှာအပြစ်တရား၏အခကား သေခြင်းပေတည်း..လို့ပြောထားတယ်
ခွဲခွာခြင်း၊ကင်းကွာခြင်း ဖြစ်။(Death means sepa-ration) အာဒံ၊ ဧ၀ အပြစ်လုပ်တဲ့အတွက် ထာဝရဘုရားနှင့် ခွဲခွာသွားခဲ့ရတယ်
အဲဒါကို ၀ိညာဉ်ရေးရာသေခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ ကျမ်းစာထဲမှာ အပြစ်ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ သေခြင်း(၃)
(၁) ၀ိညာဉ်ရေးရာသေခြင်း(ထာဝရဘုရားနှင့် ကင်းကွာခြင်း/ ခွဲခွာခြင်း)
(၂) ခန္ဓာသေခြင်း(ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ကင်းကွာခြင်း/ ခွဲခွာခြင်း)
အသက်စာစောင်ထဲမှာ မပါတဲ့ လူတွေအားလုံးဟာ ဒုတိယသေခြင်းဆိုတဲ့ကန့်နဲ့လောင်တဲ့ မီးအိုင်ငရဲထဲ ချပစ်ခြင်း ခံရမှာဖြစ်တယ်။(ဗျာ၊၂၁း၈)
မွေးကတည်းကနေဒုစရိုက်အပြစ်တစ်ခုမလုပ်တဲ့သူရှိသလား .... မရှိပါ
ဒုစရိုက်တစ်ခုမှမလုပ်ရင်လည်းဗီဇအပြစ်ရှိပါတယ်၊ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားတာဖြစ်တယ် ၊အာဒံဟာဘုရားစကားနားမထောင်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားတယ်၊သူကဆင်းတက်လာတဲ့ကျွန်တော် တို့ဟာဘုရားရဲ့ရန်သူအမျိုးဖြစ်လို့အားလုံးရှင်းပစ်ခံရမှာဖြစ်တယ်
တစ်ချို့ကလည်းဒါနနဲ့မရရင်သီလ(အကျင့်)နဲ့လုပ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားကျင့်ကြံနေတဲ့သူတွေလည်းကမ္ဘာပေါ် မှာများစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပညတ်တရားကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ငရဲကနေလွတ်နိူင်မလားဆိုတာဆက်ပြီးလေ့ လာကြည့်
(၁) (ဂလ၊၃း၁၀)ဒီကျမ်းပိုဒ်အရပညတ်တရား၏အကျင့်ကိုအမှီပြုသူ (အားကိုးသူ)
တွေဟာ ကျိန်ခြင်း နဲ့စပ်ဆိုင်ပါတယ်။အမြဲမကျင့်ျနိုင်ရင်ကျိန်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါမယ်။...
မကျင့်နိုင်ရင်တော့ကျိန်ခြင်းခံရပါမယ် ငရဲ ကျတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) (ယာ၊ ၂း၁၀ )အမြဲကျင့်နိုင်တယ်ပဲလားဦး......... တစ်ခုချိုးဖေါက်ရင်အားလုံးချိုးဖောက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်လို့ငရဲကျမှာပဲလို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်
လူတစ်ယောက်ကအသက်တစ်ရာမှာသေမယ်ဆိုပါစို့။(၉၉)နှစ်တရားကျင့်ပေမယ့်တစ်ခုလေးချိုးဖောက်မိ ရင်နေ့တိုင်းချိုးဖောက်တဲ့လူနဲ့ ငရဲကျမှာအတူတူဖြစ်သွားပါတယ်......
ဥပမာ...သံကြိုးကွင်းတွေအမှီပြုပြီးကူးနေရာကနေတစ်ကွင်းပြုတ်သွားတာနဲ့(အားလုံးပြုတ်ဖို့မလိုဘဲ)အောက် ကိုကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သံကြိုးကွင်းတွေဟာပညတ်တော်တွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျင့်တဲ့သူကောသေရင်ဘယ်ရောက်မလဲ ငရဲ........... ဘာဖြစ်လို့လဲ
(၃) (ရော၊၃း၂၀)ဆိုလိုတာက လူလူချင်းသတ်မှတ်တဲ့စံနှုန်းအရ(၅)နာရီတရားကျင့်သူ(၁၀) နာရီ(၁၅)နာရီကျင့်သူစသဖြင့်သူ့ထက်ငါသာ၍ကောင်းတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောလို့ရကောင်းရပါမယ်
မကောင်းမြတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံဝင်နိုင်လောက်အောင်ငရဲကလွတ်နိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့အကျင့် ကျင့်သူဖြောင့်မတ်သူမရှိဘူး (ရော၊၃း၁၀-၁၂)...
ဖြောင့်မတ်စွာနေပြမယ့်ကွယ်ရာမှာဘိန်းဖြူအရောင်းအ၀ယ်လုပ်လို့ရဲကဖယ်းမိပြီးတရားသူကြီးရှေ့ မှာအစစ်ခံရတဲ့အခါပြစ်မူထင်ရှားရင်ထောင်ကျရသလိုပဲလူသားအားလုံးကိုတရားစီရင်မယ့်အရှင်တရား သူကြီးဖြစ်တဲ့ထာဝရ
ဒါကြောင့်ပညတ်တရားအကြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်အကျည်းချုပ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတရား ကျင့်ကျင့်ငရဲ့ကျရတော့မယ်လို့ ကျမ်းစာကပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူနဲ့ဘုရားဟာအပြစ်ကြောင့်ကင်းကွာနေပြီးလူတွေဟာထာဝရငရဲမှာလမ်း ဆုံးကြရပါတော့မယ်၊ အဲဒီကနေလွတ်ဖို့ကုသုလ်ကောင်းမူပညတ်တရားအကျင့်တရားများနှင့်ကြိုး စားပေမယ့်လည်း မရနိုင်မှန်းသိလို့မေတ္တာတော်ရှင်ဘုရားသခင်ကလူကိုငရဲမှကယ်တင်တော်မူ
ဖို့ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတရားကိုကျေးဇူးတရား(တနည်း)ကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားလို့ခေါ်ပါ တယ်။
(၁) ၁တိ၁း၁၅... ယေရူခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှာဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည် ဟူသောစကားဖြစ်၏။အကြွင်းမဲ့ခံယူအပ်သောစကားလည်းဖြစ်၏။
သခင်ယေရူ ဤလောကကိုဘာအတွက်ကြွလာတာလဲ.... (အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုကယ်တင်ဖို့)
သခင်ယေရူက လူတွေကိုဘယ်လိုကယ်ခဲ့သလဲ...... လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံခြင်းအားဖြင့်(ရော၊ ၅း၈) သခင်ယေရူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံတဲ့အခါသူ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ရှိသမျှကို
အ၀တ်ပေရင် ဆပ်ပြာနဲ့ရေနဲ့ဆေးရတယ်အပြစ်တွေကိုပေရင် အသွေးတော် အားဖြင့်သာဆေးကြောလို့ရတယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောပါ တယ်။(၀တ်၊ ၁၇း၁၁။ယေဗြဲ၊၉း၂၂)
အမူပြီးပြီ ဆိုတဲ့စကားပဲ ဂရိဘာသာစကားမှာ အပြစ်အကြွေးရှိသမျှအပြည့်အ၀ဆပ်ပြီးပြီ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပယ်
ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်အားလုံးအတွက် သခင်ယေရူဘုရားကပေးဆပ်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။
မိတ်ဆွေမှာအကြွေးသိန်း(၅၀၀)တင်နေမယ်ကြွေးရှင်ကလည်း ဒီအပတ်အတွင်းပြန်မဆပ်နိုင်ရင်တရားစွဲတော့မယ် ဆိုကြပါစို့ မိတ်ဆွေမှာပေါင်နှံစရာပေးစရာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမကြာခင်ထောင်ထဲကျဖို့သေချာနေမှာဘဲ။
အဲဒီအချိန်မှာကုဋ္ဋေကြွယ်သူဋ္ဌေးကြီးတစ်ဦးကမိတ်ဆွေအကြောင်းသိသွားပြီးသနားလို့ဆပ်ပေးမယ်ပြန် ဆပ်စရာမလိုဘူးဆိုရင် မိတ်ဆွေလက်ခံမလားဒါမှမဟုတ်ငြင်းပယ်မလား၊...
သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရားအဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံရင်ငရဲကျမှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးမိတ်ဆွေ ရဲ့အပြစ်အားလုံးလည်းလွတ်ခြင်းအခွင့်ရပါတယ်၊မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားရဲ့သားဖြစ်ခွင့်ကိုရပြီးထာဝရအသက် ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပါတယ်(ယော၁း၁၂။၆း၄၇)ဒါဟာသူရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်း(ကိုယ်စားအသေခံပေးခြင်း အပြစ်ကြွေးဆပ်ပေးခြင်း)ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျမ်းစာက ကျေးဇူးတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်(ဧ၂း၈-၉)မှာယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်
ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ မိတ်ဆွေအတွက် ယေရူဘုရားလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အသေခံတော်မူခြင်း အပြစ်ကြွေးဆပ်ပေးတော်မူခြင်းကိုငါ့အတွက်ကျွန်တော်မအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် (ယုံကြည်သောအားဖြင့်) ယုံတဲ့အချိန်ကစပြီးဘုရားရဲ့(ကျေးဇူးတော်ကြောင့်)ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
ရောက်ရမယ်လို့ကျမ်းစာကမပြောပါဘူး ရောက်ရ၏လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံတဲ့အချိန်ကစပြီး ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။
(ခရစ်တော်ယေရူဘုရားဟာငါ့ကိုယ်စားအပြစ်ကြွေးအားလုံး ဆပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ ကျေးဇူးပြုခြင်း(တနည်း)
ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်လွယ်လွန်းအားကြီးလို့ခင်ဗျားမယုံမှာတောင်စိုးရိမ်မိတယ်ဘာကြောင့်လွယ်နေ သလဲဆိုရင်မလွယ်တဲ့အပိုင်း ကိုခရစ်တော်ကလုပ်ထားပေးလို့လေ
ပေးပါဆိုရင်လွယ်ပါ့မလားမလွယ်ဘူးမဟုတ်လား။လွယ်တယ်ပဲထားအုံးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အတွက် အသက်ပေးမလားဆိုရင် လွယ်ပါ့မလား မလွယ်ဘူးမဟုတ်လား....
အခု ယေရူဘုရားကကားတိုင်ပေါ်မှာ ဘာလုပ်ပေးသွားသလဲ .. အသက်ပေးသွားတယ် မဟုတ်လား ...
ဒါဟာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့ ငရဲအကျစေချင်လို့လုပ်ပေးသွားတာလေ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်(အသေခံပေးခြင်း ကျေးဇူးတော်ကြောင့်)ယုံကြည်လိုက်ယုံကလေးနဲ ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတာပဲ ဖြစ်တယ်။
သူကောင်းလို့ရသွားတာလား ။ယေရူကောင်းလို့လား (ယေရူကောင်းလို့)
သူလုပ်လို့ရသွားတာလား၊ ယေရူလုပ်ပေးလို့လား (ယေရူလုပ်ပေးလို့)
ယေရူကောင်းလို့လား.......... မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော် လုပ်လို့လား.....ယေရူလုပ်ပေးလို့လား
ဒါဆိုရင် ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာ မသေခငိသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလား
ဒါကြောင့် ယေရူဘုရားကို ယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ဘုရားသားဖြစ်မယ်(ယော၊၁း၁၂)
ခေါင်းငုံ့ပြီးစိတ်ထဲက ယုံကြည်လျက် သခင်ယေရူဘုရားကို အာရုံပြုလျက်အောက်ပါ ဆုတောင်းချက်အတိုင်းဆုတောင်းပြီး ယေရူဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အပြစ်ကိုယ်စားအသေခံပြီး(၃)ရက်မြောက်တဲ့နေ့၌ အသက်ရှင်သော ဘုရားဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါ၏။ကျွန်ုပ်၏ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားအဖြစ် ကိုယ်တော်ကို ယခု ယုံကြည်လက်ခံပါ၏။
ကျွန်ုပ်အပြစ်များကိုလွတ်ပြီး ထာဝရအသက်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အသက်တာကို အုပ်စိုးတော်မူပါ။အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်း ပုံသွင်း ပြုပြင်တော်မူပါ။နာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းပါ၏။(အာမင်)
မိတ်ဆွေဟာ အထက်ပါ ဆုတောင်းချက်အတိုင်းယုံယုံကြည်ကြည်ဆုတောင်းလျက် သခင်ယေရူဘုရားကို ယုံ
-(၁) ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ခွင့်ရပြီ (ယော၊၁း၁၂)
နားလည်လျက် အကျိုးဖြစ်ခဲ့လျှင် အခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းဝေငှပေးရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေအပေါ် ဘုရားသခင် ကြွယ်ဝစွာ ကောင်းချီးအင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေသော။
ကယ်တင်ခြင်းရပြီးကြောင်းရှင်းလင်းစွာသိရှိပြီးနောက်ခရစ်ယာန် အသက်တာ မည်သို့ဆက်လက်ရှင်ရမည်ကို
သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာနည်း ( How to Study the Bible )
သမ္မာကျမ်းစာသည် စာအုပ်အားလုံးအနက် အထွဋ္ဋ်အထိပ် (အမြင့်မြတ်ဆုံးသော) ဖြစ်သော စာအုပ်ပေတည်း။ ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် လူသားတို့ ကို အမိန့် ရှိတော်မူသော စာအုပ်ဖြစ်၏။ မြင့်မြတ်သန့် ရှင်းသော ညွန်ကြားမှုကို ပေးသည့် စာအုပ်လည်းဖြစ်သည်။ ၀မ်းနည်းချိန်၌ နှစ်သိမ့်မှုကို ၄င်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည့်အခါ၌ လမ်းညွန်မှုပေးခြင်း၊ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ အပြစ်များ အတွက် ဆိုဆုံးမခြင်းနှင့် ကျွနိုပ်တို့ လိုအပ်သည့်အရာများကို နေ့ စဉ်လျှို့ ဆော်ပေးလျှက် ရှိသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် စာအုပ်တအုပ်တည်းသာမဟုတ်။ စာအုပ်ပေါင်းချုပ်တအုပ်ဖြစ်ပြီး စာပေရသ မျိုးစုံနှင့် ပြည့်လျက်ရှိသည်။ သမိုင်း ရာဇ၀င်အကြောင်းအရာများ၊ ကဗျာ၊ လင်္ကာ၊ အထုပ္ပတိ၊ ကြိုတင်ဟောကြားချက်များ၊ ဒဿနဗေဒ၊ သိပ္ပံနှင့် စိတ်ဝိညာဉ် လျိုဆော်မှု ရစေသော စာပေရသများ ပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုသော်၎င်း၊ အချို့ အပိုင်းများကို၎င်း၊ ဘာသာစကား အမျိုးပေါင်း ၁၂၀၀ ထက်မက ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး၊ နှစ်စဉ်ရောင်းချရသော လုံးချင်းစာအုပ်များအနက် အရေအတွက် အများဆုံးရောင်းရသော စာအုပ်တအုပ်လည်း ဖြစ်သည်။
လူကြီး လူငယ်မရွေး မေးနေကြသော ကြီးမားသည့် မေးခွန်းများ၏ စစ်မှန်သော အဖြေများကို သမ္မာကျမ်းစာကသာလျင် ပေးနိုင်စွမ်းရှိ၏။ ဤမေးခွန်းများမှာ “ကျွုနိုပ်သည် မည်သည့်နေရာက လာသနည်း။” “မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်နည်း။” “အဘယ့်ကြောင့် ဤလောကမှာ ရှိနေပါသနည်း။” “သမ္မာတရားကို မည်သို့ သိနိုင်သနည်း။” ဟူသော မေးခွန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော အကြောင်းအရာများကို ဖွင့်ပြသည်။ လူသားတို့ ၏ ရင်ဆိုင်ရသည့် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်း နှင့် အပြစ်ကြောင့် ခံစားရသည့် ပြဿနာအကြောင်းရင်းများကို ရှင်းထားသေး၏။
သမ္မာကျမ်းစာ တအုပ်လုံး၏ ကြီးမြတ်သော အကြောင်းရင်းမှာ သခင်ခရစ်တော် အကြောင်းနှင့် လူသားတို့ကယ်တင်းခြင်း ရရန်အတွက် သခင်ယေရှု ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆောင်ရွက်ချက်ပေတည်း။ ခရစ်တော်၏အကြောင်းနှင့် သူ၏ အမှုတော်အကြောင်းများကို ဂတိတော်ထားရှိခြင်း၊ ကြိုတင် ဟောပြောထားခြင်း၊ ပုံတော်ထားခြင်းတိုကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ နိမိတ် လက္ခ္စဏာ အဖုံဖုံဖြင့် တွေ့ မြင်ရသည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင်လည်း သခင်ခရစ်တော်၏ သမ္မတရားနှင့် ကောင်းမြတ်မှုကို ဘော်ထုတ်ထားသေးသည်။ သြ၀ါဒစာများတွင်လည်း ခရစ်တော်၏ သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြထားသည်။ ခရစ်တော်သည် နောက်တဖန် ဘုန်းအသရေ ထွန်းတောက်စွာဖြင့် ပြန်လာမည့်အကြောင်းကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းက ကြိုတင်ဟောကြားထား၏။ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ ရေးသားထားသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည့် ဤသမ္မာကျမ်းစာ၏ မဟာတာဝန် တရပ်မှာ သခင်ယေရှုတည်းဟူသော အသက်ရှင်လျှက်ရှိသည့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ထုတ်ဇေါ်ရန် ဖြစ်ပေသည်။
ဒေါက်တာ ဝေးလ်ဘာအမ်။ စမစ်သ် ( Dr. Wilbur M. Smith) က သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှု့ လေ့လာ ခြင်းဖြင့် ရရှိသော အကြောင်းရင်း ၇ ချက်ကို တင်ပြထားသည်။
၁၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို့ ၏ အပြစ်ကို ဘော်ထုတ်ပြီး စီရင်ချက်ချသည်။
၂၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို့ ကို ညစ်ညမ်းသော အပြစ်များမှ ဆေးကြောသန့် စင်ခြင်းဖြင့် ကူညီထောက်မသည်။
၃။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို့ ကို ခွန်အားပေးသည်။
၄။ သမ္မာကျမ်းစာသည် မည်သည့်အရာကိုလုပ်ရမည်ကို လမ်းညွန်ပေး၏။ (ဦးဆောင်လမ်းညွန်သည်။)
၅။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို့ အပြစ်ကို အောင်နိုင်ရန် ထား (ဓါး) ကိုပေးတော်မူ၏။
၆။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို ၏ ဘ၀အသက်တာကို သီးပွင့်ရန် (အကျိုးရှိစွာ လျှောက်လှမ်း နိုင်ရန်) ပြုလုပ်ပေးသည်။
၇။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ကျွနိုပ်တို့ အား ဆုတောင်းနိုင်သော စွမ်းအားကို ပေး၏။
သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာရန် စာပေကျမ်းဂန်စု (awhole library of books ) တခုလုံး မလိုပါ။ သမ္မာကျမ်းစာကပင် ဝေဖန်သုံးသပ်၍ ဘော်ပြခြင်း၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဖွင့်ဟခြင်းတို့ ကို လုပ်ဆောင်ပေးလေသည်။ ဤကျမ်းစာအုပ်တွင် ဘော်ပြထားသော လမ်းညွန်မှု အကူအညီများ အားဖြင့် ကျမ်းစာကို သက်ဆုံးတိုင်အောင် လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၁။ သမ္မာကျမ်းစာကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်း
က။ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအားဖြင့် ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း
ကျမ်းစာကိုလေ့လာခြင်းသည် ဦးတည်ချက်မဟုတ်ပဲ ဘုရားသခင်ကိုသိပြီး အလိုတော်ကိုလက်ခံလိုက်နာရန် ဦးတည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ၀ိညာဉ်ခွန်အားရရန် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို သိပ္မံပညာရှင်။ ဆေးဆရာဝန်ဖြစ်သူ (Dr. Howard A. Kelly) က ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်။ အသေအချာဂရုစိုက်၍ နေ့ စဉ်ဖတ်ခြင်းဖြင့် စာမျက်နှာများမှ မိမိစိတ်နှလုံးထိ ထင်ဟတ်ဖတ်ရှုလေ့လာရသည်ဟု ပြောဖူးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ဖတ်ရှုရာတွင် အထောက်အကူပြုသည့် အကြံပြုချက်များကို ဖေါ်ပြပါမည်။
(၁) ကျမ်းစကဖတ်ခြင်းကို ဆိုတောင်းခြင်းဖြင့် အစပြုပါ (ဆာ ၁၁၉း၁၈၊ ယော ၁၆း ၁၃ – ၁၅)
(၂) ဖတ်ခဲ့သောကျမ်းပိုဒ်များနှင့် ပတ်သတ်သည့် အေရးပါသောအချက်များကို မှတ်စုရေးထားပါ။ဤအတွက် မှတ်စုစာအုပ်ကလေး တအုပ်ထားသည့်ပါသည်။
(၃) အခန်းကြီး (Chapter) တခုသော်၎င်း၊ နှစ်ခု သုံးခုကို၎င်း အချိန်ယူ ဖြေးဖြေးချင်းဖတ်ပါ။ သို့ မဟုတ် အပိုဒ် တပိုဒ်ကိုပဲ ဖတ်လိုလျင် ဖတ်ပါ၊ ဖတ်ပြီးလျင် ကျမ်းပိုဒ် အဓိပ္မါယ် ဘာလဲဆိုသည်ကို မိမိကိုယ် ပြန်မေးခွန်းထုတ်ပါ၊ ထို့ နောက် တဖန် ပြန်ဖတ်ပါ။
(၄) ကျမ်းစာ၏ အခန်းကြီးတခုလုံး သို့ မဟုတ် ကျမ်းပိုဒ်၏ စစ်မှန်သော အဓိပ္မါယ်ကိုရှာနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမည့် ဘော်ပြပါ မေးခွန်းများကို မိမိကိုယ်ကို မိမိမေးပါ။ ထို့ နှောက် အဖြေများကို မှတ်စုစာအုပ်တွင် ရေးချပါ။ (က) ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိကအချက်ကား အဘယ်နည်း။ (ခ) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဘော်ပြသနည်း။ မည်သူက ပြောနေသနည်း။ မည်သူ့ ကို ပြောနေသနည်း။ မည်သူက သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါသနည်း။ (ဂ) ဤကျမ်းပိုဒ်၏ အဓိကကျမ်းချက်ကား အဘယ်နည်း။ (ဃ) ဤကျမ်းပိုဒ်သည် သခင်ခရစ်တော်အကြောင်းကို ကျွနိုပ်အား အဘယ်သို့သွန်သင်နေပါသနည်း။ (င) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကျွနိုပ်ဝန်ချတောင်းပန်ရမည့် အပြစ်မျိုးကို ဘော်ပြထားပါသလား။ (စ) ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် ကျွန်ုပ် နာခံရမည်း အမိန့် တော် တခုခု ပါဝင်ပါသလား။ (ဆ) ကျွန်ုပ်အတွင် ဂတိတော်တခုခုကို ပေးနေပါသလား (ဇ) ကျွန်ုပ်လိုက်နာဖို့ညွန်ကြားချက်တခုခု ပါဝင်ပါသလား၊
(၅) ၀ိညာဉ်ရေးရာ နေ့ စဉ်မှတ်တမ်း (Spiritual diary) စာအုပ်တအုပ်ထားပါ၊ နေ့ စဉ် ဘုရားသခင်က မိမိအား ကျမ်းစာမှ တဆင့် ဘာပြောနေသည်ကို ရေးမှတ်ပါ၊
(၆) သမ္မာကျမ်းစာမှ ကျမ်းချက်များကို အလွတ်ကျက်ပါ၊ အသက်ကြီး၍ အလွတ် မကျက်နိုင်တော့ဘူးဟု မထင်ပါနှင့်။ စက္ကူကပ်ပြားလေးများတွင် ကျမ်းချက်များကို တဖက် ကျမ်းကိုးများ (Reference) များကိုတဖက်ရေးထားပါ။ ၄င်းတို့ ကို ဘယ်သွားသွား ထည့်ယူသွားပြီး ရထားစောင့်နေစဉ်ဖြစ်စေ၊ တဦးတယောက်ကို စောင့်နေစဉ်ဖြစ်စေ၊ အချိန်ရတိုင်း ပြန်၍စစ်ဆေး ကျက်မှတ်နိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းတနည်းမှာ ညအိပ်ယာမ၀င်ခင် မိနစ်အနည်းငယ် ကျမ်းပိုဒ်များကို စဉ်းစားလျင် အိပ်ချိန်၌ မသိစိတ် (subconscious) မှ၎င်း။ ကျမ်းပိုဒ်များကို မှတ်မိနိုင်စွမ်း ပေးလိမ့်မည်။
(၇) ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံပါ။ ရှင်ပေါလုက တိမောသေကို မိန့် မှာ သကဲ့သို “ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရာသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၏“ ၂တိ ၃း၁၆။ ထို့ ကြောင့် “နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာရုံမျှသာ ပြုသောသူမဟုတ်၊ တရားကိုကျင်သောသူ ဖြစ်ကြလော့၊” ဟု မိန့် မူထားသည်။ ယာ ၁း၂၂
(၈) ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မှီလေးတွင် Navigators အသင်းအဖွဲ့ တခုကို အမျိူးသားတစုမှ ဖွဲ့ ထားသည်၊ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကို အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့ မှ ပုံစံတရပ်မှာ (က) ဆုတောင်းပြီးသောအခါ ပဌမအကြိမ် တွင် ကျမ်းပိုဒ်ကို ဖြေးဖြေးနှင့် အသံမထွက်ပဲ ဖတ်ပါ။ နောက်တကြိမ်း ဖတ်ရာတွင် အသံထွက်ဇတ်ပါ။ (ခ) မှတ်စုစာအုပ်ကြီးတအုပ်တွင် စာမျက်နှာတခုစီတွင် ကော်လံများချပြီး ဘော်ပြပါ ခေါင်းစဉ်များကို ကော်လံအလိုက် အခန်းကြီးခေါင်းစဉ်၊ အဓိက ကျမ်းချက်၊ ထူးခြားသော သမ္မာတရား အပြန်အလှန်ကျမ်းညွှန်း၊ ကျမ်းပိုဒ်နှင့်ဆိုင်သော အခက်အခဲများ၊ သင့်အတွက် မည်သို့အသုံးကျပုံ၊ ကျမ်းပိုဒ်၏ အကျဉ်းချုပ် သို့မဟုတ် ကျောရိုးအချက်အလက်များ (outline) ဟူ၍ ကော်လံတခုစီတွင် မိမိနှစ်သက်သောအချက်များကို ရေးမှတ်ထားပါ။
ဤလေ့လာနည်းအားလုံးကို တကြိမ်အတွင်း အသုံးပြုရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ တခုပြီးမှ တခု ဖြေးဖြေးခြင်းအသုံးပြုပါ။ မိမိနှင့်ကိုက်ညီမည်ထင်သည့် လေ့လာနည်းများ အကြံပြုချက် များကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်၏အရင် သန်းပေါင်းများစွာသောသူများ လေ့လာသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာလေလေ ပို၍ ဖတ်ချင်လေလေ ဖြစ်မည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာ၏ အမှန်တရားများကို ပို၍ လေးလေးနက်နက် လေ့လာလိုသူများအတွက် အကြံပြုချက်များကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ခ။ သမ္မာကျမ်းစာဆိုင်ရာ အသိပညာအတွက် လေ့လာခြင်း
– အခန်းကြီးလိုက် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Chapters )
– အပိုဒ်လိုက် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Paragraphs )
– ကျမ်းချက်များအလိုက် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Verses )
– ကျမ်းတစောင်းချင်းအလိုက် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Books )
– စကားလုံးများအလိုက် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Words )
– အထုပ္မတိအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Biographies )
သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာရာ၌ တန်ဘိုးရှိသောနည်းလမ်းမြောက်များစွာရှိသည်။ ကျမ်းစာကို အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် လေ့လာသကဲ့သို့ ကျမ်း (စာစောင်) တိုင်းတွင် ကြီးမြတ်သော အမှန်တရားများ ပေါ်လွင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အနုစိတ် မှန်ဘီလူးနှင့် ကြည့်သကဲ့သို့ ကျမ်းစာကိုလေ့လာရာ၌ ၀ိညာဉ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော ကြွယ်ဝမှုတို့၏ ဆန်းကြယ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်တို့ကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ပို၍ လေးလေးနက်နက် လေ့လာလိုလျှင် လက်တွေ့အရ ထိရောက်သောနည်းလမ်းများစွာကို ဤအပိုင်းတွင် ဘော်ပြထားသည်။ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ စနစ်ကျသောနည်းဖြင့် တသွေမတိမ်း ကျမ်းစာကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ နိဂုံး
သမ္မာကျမ်းစာကို လေ့လာသော အခြားနည်းအမျိုးမျိုးရှိပါသေးသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာခြင်း။ လူမူရေးဆိုင်ရာ လေ့လာခြင်း။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လေ့လာနည်း။ အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာ လေ့လာနည်း အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားသော ကျမ်းစာလေ့လာနည်းအားလုံးကို အသုံးပြုပါ။ နည်းတမျိုးကိုသာ စွဲ၍ မသုံးပဲ ငြီးငွေ့ခြင်း ကင်းရန် နည်းအမျိုးမျိုးကို လှည့်၍ အသုံးပြုကြည့်ပါ။
သမ္မာကျမ်းစာ လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ထာဝရမှန်ကန်သည့်အကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ သိရှိနိုင်ပြီး ၄င်းတို့ကို လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် မိမိ၏ ဘ၀အသက်တာတွင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံစားနိုင်ကြ မည်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင်တခုတွင် မိသားစု ၀တ်ပြုခြင်းပလ္လင်ထက် ပို၍ အရေးပါသောအရာမရှိပေ။ မိသားစုအားလုံး အိမ်တွင်ရှိစဉ် မိခင် (သို့ မဟုတ်) ဖခင် က ၀တ်ပြုခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် ဦးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အရိုးဆုံး အလွယ်ကူဆုံးမိသားစု ၀တ်ပြုခြင်းမှာ ဓမ္မသီချင်းသီဆိုခြင်း၊ မိသားစုဝင်တဦးမှ အဖွင့် ဆုတောင်းခြင်း။ သမ္မာကျမ်းစာကို အကျဉ်းချုံး လေ့လာခြင်း နှင့် မိသားစုဝင်တဦးမှ အပိတ် ဆုတောင်းခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲနက်နဲသော ကျမ်းပိုဒ်များကိုရှောင်ပြီး လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံဝတ္တု၊ အံ့သြဖွယ်ရာ၊ ယေရှုလုပ်ဆောင်ချက်များ ကျမ်းတိုတိုလေး များကို ရွေးချယ်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းတခု ဥပမာ မောရှေ အသက်သာကို အခန်းဆက်အဖြစ် တပတ်လုံး လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၃။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက် အဓိပ္မါယ် ကောက်နှုတ်ရန် အခြေခံမူများ
(၁) သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ မမှားနိုင်သောဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပေးသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်ကို အစဉ်သတိရပါ၊ သမ္မာကျမ်းစာတွင် အမှားလုံးဝမရှိ။ ဘုရားသခင်က သင့်ကိုသိစေလိုသောအရာများ၊ သိရန်လိုအပါသော ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာကို ကျမ်းစာတွင် မွတ်ဆိုထားသည်။
(၂) အနက်အဓိပ္မါယ်ကောက်ရန် အခြားမူတခုမှာ သမ္မာကျမ်းစာကို အဓိပ္မါယ် ကောက်သည့်အခါ ရာဇ၀င်နောက်ခံသဘောကို အလေးပေးရန်လိုပါသည်။ ဤနောက်ခံသဘောကို ရှုထောင့် (၃)မျိုးမှ လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) ကျမ်းပြုသူ၏ ဘ၀အခြေအနေကို လေ့လာပါ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလေ့လာလိုလျင် ထိုအချိန်ကာလတွင် ရှင်ယောဟန်သည် မည်သည့်နေရာ၌ ရောက်နေသည်၊ ဤဆန်းကြယ်သော ဗျာဒိတ်တော်ကို ဘုရားသခင်မှပေးသောအခါ ရှင်ယောဟန် ဘာလုပ်နေသည်ကို နားလည်ထားရန် အရေးကြီးပေသည်။ (ဗျာဒိတ် ၁း ၁ – ၁၀ ကိုကြည့်ပါ၊)
(ခ) ဒုတိယရှုထောင့်မှာ ရေးထားသော အကြောင်းအရာ (သို့ မဟုတ်) အဖြစ်အပျက်များသည် မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပျက်သည်၊ ထိုတိုင်းပြည်၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို နားလည်ရန် လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ရုသ ၀တ္တုကို နားလည်ရန် ထိုတိုင်းပြည်တွင် မုဆိုးမများနှင့် ပတ်သတ်သော ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု စသည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအကြောင်း အရာနှင့်ပတ်သတ်၌ ၀တ်ပြုရာကျမ်း (၂၅) နှင့် တရားဟောရာကျမ်း (၂၅) တို့ တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
(ဂ) တတိယရှုထောင့်မှာ ကျမ်းစာကိုလေ့လာရာ၌ ထိုအချိန်ကာလက တကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့သော သမိုင်းအခြေအနေနှင့် ဖြစ်ရပ်များပေါ်မူတည်၍ အနက်အဓိပ္မါယ် ကောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကိုလေ့လာသည့်အခါ အရေးကြီးသည့် အချက်မှာ ထိုအချိန်က ပါလေတိနပြည်နယ် တ၀ှမ်းလုံးရှိ ယုဒလူမျိုးများသည် ရောမအင်ပါယာ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အဖိနှိပ်ခံနေရသည်ကို နားလည်ထားရန် လိုအပ်သည်။
(၃) ကျမ်းတစောင်လုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တင်ပြချက်အရ ကျမ်းစာကို အနက်ကောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ကျမ်းတိုင်းတွင် တိကျသောရည်ရွယ်ချက်ရှိကြသည်။ ဥပမာ – ရှင်ယောဟန်သြ၀ါဒစာ ပဌမစောင် သည် ခရစ်ယာန်များအတွင်သာ ရေးထားသည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပေသည်။ (၁ယော၅း၁၃)
(၄) အနက်အဓိပ္မါယ်ဖွင့်ရာတွင် အရေးကြီးသောမူတခုမှာ ကျမ်းချက်တခုတွင် ပါဝင်သော ကျမ်းပိုဒ်များ၏ ရှေ့ နောက် အကြောင်းအရာ ( Context ) ပေါ်မူတည်၍ အနက်ကောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ ဆာလံ ၁၄း၁ တွင် “ဘုရားသခင်မရှိ” ဟုဖေါ်ပြထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် “မိုက်သောသူသည် ထင်တတ်သည်” ကို ဖတ်မှသာ အဓိပ္မါယ်အတိအကျ ပေါ်လွင်လာမည်ဖြစ်သည်။
(၅) စကားလုံး. ဆိုလိုရင်းကို အဓိပ္မါယ်ပေါ်မူတည်၍လည်း အနက်အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်ယူပါ။ ဥပမာ – “ဆုတောင်းခြင်း” (Prayer) “ကြားခံဆုတောင်းခြင်း” (Intercession) “ အသနားခံ၍ တိကျသော တောင်းလျောက်ခြင်း” (supplication) အစရှိသော စကားလုံးများ၏ အဓိပ္မါယ် အနည်းငယ်စီ ခြားနားသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
(၆) သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက်အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်နှုတ်သည့်အခါ ဘော်ပြပါ အကြောင်းအရောနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားကျမ်းပိုဒ်များအာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျမ်းစာတအုပ်လုံး၏ ဆိုလိုရင်းအကြောင်းအရ လေ့လာပြီး အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်ရမည်၊
ကျမ်းစာကို ဖတ်လျှင် ဘုရားသခင်မှ လူသားတို့ ကယ်တင်ခြင်းရဘို့ရန် ပေးထားသော နည်းလမ်းကို ကျမ်းစာအစမှ အဆုံးအထိ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုထားသည်ကို နားလည်လာ လိမ့်မည်။ နားလည်ရန် ခက်ခဲသော ကျမ်းပိုဒ်များကို တွေ့သောအခါ ကျမ်းစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ခြုံငုံ၍ မြင်တတ်ရမည်။ ဥပမာ – ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘော်ပြထားသော သားကောင်ယာဇ်များသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ခရစ်တော်အသေခံခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံခြင်းသဘောကို ပုံဘော်ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤ လွယ်ကူသောနည်းများဖြင့် ကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုလေ့လာလျင် မှားယွင်းစွာ နားလည်မှုများနှင့် တဘက်စွန်းကျ နားလည်မှုများမှ ကင်းဝေးစေမည်။ ထို့ အပြင် ဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ပါရှိသော ခက်ခဲနက်နဲသည့် ကျမ်းပိုဒ်များ၏ သွန်သင်မှုများကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်နိုင်ရန် အထောက်အကူပေးပေလိမ့်မည်။
အခန်းကြီးလိုက် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Chapters )
သမ္မာကျမ်းစာ တအုပ်လုံးတွင် စုစုပေါင်း အခန်းကြီး ၁၁၈၉ ခန်းရှိ၏။ တရက် တခန်းဖတ်သော် ၃ နှစ်အတွင် ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကို သေသေချာချာ စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာနိုင်မည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုလေ့လာမည်ဆိုလျှင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ဦးစွာဖတ်ရန် အကြံပေးပါသည်။
(၁) အခန်းကြီးတခုလုံးကို သေချာစွာဖတ်ပြီး အဓိကအချက်ကို ရှာယူပါ။
(၂) အခန်းကြီးတခုစီကို ဖတ်သည့်အခါ အဓိက ပါဝင်သောအကြောင်းရင်း၏ ခေါင်းစဉ်ကိုပေးပါ။ ဥပမာ ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ဖတ်နေလျှင် အခန်းကြီးတခုစီ၏ ခေါင်းစဉ်များကို ဤသို့ပေးနိုင်သည်။
အခန်းကြီး ၁ – “ယေရှုခရစ်တော် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်”
အခန်းကြီး ၂ – “ကာနမြို့၌ ကျင်းပသော မင်္ဂလာပွဲ”
အခန်းကြီး ၃ – ” အသစ်မွေးဖွားခြင်း”
အခန်းကြီး ၄ – “ရေတွင်းနားမှ ရှင်မာရိ အမျိုးသမီး”
အခန်းကြီး ၅ – “ဗေသေသ ဒရေအိုင်၌ လူတယောက်ကို ရောဂါပျောက်စေခြင်း”
အခန်းကြီး ၆ – “လူ၅၀၀၀ ကိုကျွေးမွေးခြင်း”
(၃) ဤအခန်းကြီးကို နောက်တဖန်ပြန်ဖတ်ပြီး ၄င်းအခန်း၏ အဓိက ကျောရိုးအချက်အလက် (outline) ကိုရေးချပါ။ ဥပမာ ရှင်ယောဟန် ခရစ်ဝင် အခန်းကြီး(၁) ကို ဖတ်သည့်အခါ ကျောရိုးအချက်အလက်ကို ဤသို့ရေးနိုင်ပါသည်။
“ယေရှုခရစ်တော် – ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်”
(က) ယေရှုခရစ်တော်သည် ထာဝရ နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည် (ယော ၁-၉)
(ခ) ယေရှုခရစ်တော်သည် လောကသို့ ကြွလာ၏ (၁၀ – ၁၈)
(ဂ) ရှင်ယောဟန်က ခရစ်တော်ကြွလာမည့်အကြောင်းကို သက်သေခံသည်။ (၁၉ – ၂၈)
(ဃ) ရှင်ယောဟန်က ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ (၂၉ – ၃၇)
(င) ပဌမဦးဆုံးသော တပည့်တော်များကို ယေရှုခေါ်တော်မူသည်။ (၃၈ – ၅၁)
(၄) အခန်းကြီးတခုကို ဖတ်သောအခါ ဘော်ပြပြီးသော နေ့စဉ်ခွန်အားအတွက် ဖတ်ရန်ဘော်ပြထားသော အကြံပြုချက် အမှတ်(၄) တွင် ပါရှိသောမေးခွန်းများကို မိမိကိုယ်ကို မိမိမေး၍ အဖြေများကို ပေးကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဤအခန်းတွင် လက်တွေ့အသုံးကျနိုင်သည့် အချက်သော၎င်း။ ဓမ္မကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အခက်အခဲပြသနာများကို တွေ့ရာတွင်၎င်း မှတ်ထား၍ ရေးချပါ။ ထို့နောက် သင်၏ အက္ခရာစဉ် ကျမ်းညွှန်း (concordance) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျမ်းပိုဒ်များတွင် ပါဝင်သော အဓိကစကားလုံးများကို ရှာပြီး ကျမ်းစာ၏ မည်သည့်အပိုင်းများတွင် ဤမေးခွန်း သို့မဟုတ် အခက်အခဲအကြောင်းကို ဘော်ပြသည်ကို လိုက်ရှာပါ။ မှန်ကန်သောအဓိပ္ပါယ်ကို ရရန်အတွက် ကျမ်းပိုဒ် တခုနှင့်တခုကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အရေးကြီးသော အခန်းကို နားလည်နိုင်ရန် ရှေ့တွင်ရှိသော အခန်းကို ၄င်း၊ နောက်တွင်ပါသော အခန်းကို၎င်း ယှဉ်တွဲ၍ ဖတ်ရှုလေ့လာသင့်သည်။
အပိုဒ်လိုက် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Paragraphs )
စာပိုဒ်တပိုဒ်ဆိုသည်မှာ အကြောင်းအရာတခုကို ၀ါကျများစုပေါင်းဖွဲ့စည်း၍ ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူသည် အရေးပါသော အကြောင်းအချက်သစ်တခုကို ပြောင်း၍ရေးသားလိုလျှင် စာပိုဒ်အသစ်တခုဖြင့် ပြောင်းရေးလေ့ရှိသည်။ ဤသို့ စာပိုဒ်အလိုက် လေ့လာခြင်းကို အစိတ်အပိုင်းခွဲ၍ (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖျာ၍) ကျမ်းစာကိုလေ့လာခြင်း (Analytical Bible Study) ဟုခေါ်သည်။
(၁) အဓိက အတွေးအခေါ် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာကိုသိရန် စာပိုဒ်ကို သေချာစွာဖတ်ပါ။
(၂) စာပိုဒ်တွင်ပါသော အဓိက စကားလုံးများနှင့် ၀ါကျများ မည်သို့ဆက်စပ်နေသည်ကို ရှာနိုင်ရန် ပေးထားသော စာပိုဒ်ကို ပြန်၍နားလည်လွယ်အောင် ရေးသားနိုင်သည်။ ဥပမာ မဿဲ ၆း၅-၈ တွင် တွေ့ရသော တောင်ပေါ်ဒေသနာတော်တွင် ပါသောဆုတောင်းခြင်းနှင့် ဆိုင်သည့်ကျမ်းပိုဒ်ကို လေ့လာလျှင် ဤသို့ပြန်၍ ရေးသားနိုင်ပါသည်။
“သင်တို့သည် ဆုတောင်းပဌနာပြုသောအခါ သူတော်ကောင်းဆောင်သူများ (Hypocrites) ကဲ့သို့မပြုကြနှင့်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုတော် သူတို့သည် လူအများမြင်နိုင်သော ဗိမာန်တော်ထဲတွင် ၄င်း၊ လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင်၎င်း၊ ဆုတောင်း ပဌနာပြုလိုကြသည်။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား ထိုသူတို့သည် မိမိအကျိုးကို ခံစားရလိမ့်မည်။”
“သို့သော် သင်တို့သည် ဆုတောင်းပဌနာပြုသောအခါ မိမိအခန်းတွင်းသို့ သွားပြီး၊ တံခါးကို ပိတ်လျှက် လူသူမသိသောနေရာတွင် ရှိသော သင်တို့အဘထံသို့ ဆုတောင်းပါ။ လူသူမသိမမြင်သော သင်တို့အဘသည်လည်း သင်တို့အား ပွင့်လင်းစွာ ထောက်မလိမ့်မည်။”
“သို့သော် သင်တို့သည် ဆုတောင်း ပဌနာပြုသောအခါ သာသနာပလူများကဲ့သို့ တဖန်တလဲလဲမဆိုပါနှင့်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် စကားများဆိုခြင်းဖြင့် သူ၏ ဆုတောင်းသံများကို ကြားမည်ဟု ထင်ကြသည်။”
“ထို့ကြောင့် သူတိုနည်းတူ မလုပ်ကြနှင့်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သင်တို့မတောင်မီကပင် သင်တို့ ဘာလိုသည်ကို သင်တို့အဘ သိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။”
၃။ ဤသို့ကျမ်းပိုဒ်ကိုပြန်၍ နာလည်လွယ်အောင် ရေးသောအခါ တပိုဒ်နှင့်တပိုဒ် မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကို တွေ့လာလိမ့်မည်။ ထိုအခါ လွယ်ကူသော ကျောရိုးအချက်များကို ရေးချနိုင်မည်။ ဥပမာ မဿဲ ၆း၅-၁၅ ကို အသုံးပြုလျှက် ကြောရိုးအချက်အလက် (outline) ကို တဖက်ပါအတိုင်း ရေးနိုင်သည်။ “မည်ကဲ့သို့ ဆုတောင်းပဌနာပြုရမည်ကို ကျွနိုပ်တို့အား ယေရှုသင်ပြခြင်း” မဿဲ ၆း၅-၁၅
(က) မည်သို့ ဆုတောင်း ပဌနာမပြုရန် မဿဲ ၆း၅၊၇၊၈)
(၁) သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်သောသူများကဲ့သို့ လူမြင်နိုင်သော နေရာ၌ ဆုတောင်း ပဌနာ မပြုလုပ်ရန် (၆း၅)
(၂) ထပ်ဖန်တလဲလဲ မဆိုရန် (၆း၇၊၈)
(ခ) မည်သို့ ဆုတောင်း ပဌနာပြုရန် (မဿဲ ၆း ၆၊ ၉-၁၃)
(၁) သူများမသိရန် လျှိုးဝှက်စွာ အဘဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းရန် (၆း၆)
(၂) သခင်ယေရှု သင်ပေးသော ပဌနာတော်၏ နမူနာအတိုင်း ဆုတောင်းရန် (၆း၉-၁၃)
၄။ ဤစာပိုဒ်တွင် ပါဝင်သော အရေးပါသည့် စကားလုံးများကို အက္ခရာစဉ် ကျမ်းညွှန်းတွင် ကြည့်လျှင် အထောက်အကူပြုပါသည်။ ဥပမာ “လျှို့ဝှက်သောလူ” နှင့် “သာသနာပလူ” အစရှိသော စကားလုံးများ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၄င်းအကြောင်းကို ဘော်ပြသော အခြားကျမ်းပိုဒ်များ တခုနှင့်တခု နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသော် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စစ်မှန်သော သဘောအခြေအနေ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ ရရှိသော ဆုတောင်းခြင်း၏ အဖြေများကို အမှန်တကယ် နားလည်နိုင်မည်။
အထုပ္မတိအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Biographies )
သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်က လူသားတို့ကို၎င်း လူသားတို့အားဖြင့် ၄င်း မိမိကိုယ်ကို ထင်ရှားဖေါ်ပြသော မှတ်တမ်းတအုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းများတွင် အထ္ထုပ္ပတိပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာစရာများဖြင့် ကြွယ်ဝလျှက်ရှိသည်။ အချို့ကို ဘော်ပြရသော်
နောဧ ၏ အသက်တာ က ၅း၃၂ – ၁၀း၃၂
အာဗြာဟံ၏ အသက်တာ က ၁၂ – ၂၅
ယောသပ်၏ အသက်တာ က ၃၇ – ၅၀
ဒေဗောရ ၏ အသက်တာ သူကြီး ၄ – ၅
ကျမ်းစာတွင်ပါဝင်သော အထ္ထုပ္ပတိကြီးများကို လေ့လာရန် နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။
၁။ မိမိလေ့လာလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ဘ၀အသက်တာ၏ ထင်ပေါ်ထူးခြားသည့်အကြောင်း ပါသောကျမ်းသို့မဟုတ် ကျမ်းပိုဒ်များကို ဖတ်ပါ။ ဥပမာ အာဗြာဟံ အကြောင်းကို ကမ္ဘာဦးကျမ်း (၁၂ – ၂၅) တွင် ၄င်း။ ဟေဗြဲသြ၀ါဒစာ (၁၁) နှင့် ရောမသြ၀ါဒစာ (၄) တွင်၎င် ညွှန်းထားသည်။
၂။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းကို အက္ခရာစဉ် ကျမ်းညွှန်းတွင် လိုက်ရှာပါ။
၃။ ကျမ်းချက်များ၏ အစိတ်အပိုင်းတွင် သွယ်ဝိုက်၍ ညွှန်းထားသည်ကို ဂရုပြု မှတ်သားပါ။
မိသားစုသမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Family Bible Study )
ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင်တခုတွင် မိသားစု ၀တ်ပြုခြင်းပလ္လင်ထက် ပို၍ အရေးပါသောအရာမရှိပေ။ မိသားစုအားလုံး အိမ်တွင်ရှိစဉ် မိခင် (သို့ မဟုတ်) ဖခင် က ၀တ်ပြုခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် ဦးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ အရိုးဆုံး အလွယ်ကူဆုံးမိသားစု ၀တ်ပြုခြင်းမှာ ဓမ္မသီချင်းသီဆိုခြင်း၊ မိသားစုဝင်တဦးမှ အဖွင့် ဆုတောင်းခြင်း။ သမ္မာကျမ်းစာကို အကျဉ်းချုံး လေ့လာခြင်း နှင့် မိသားစုဝင်တဦးမှ အပိတ် ဆုတောင်းခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲနက်နဲသော ကျမ်းပိုဒ်များကိုရှောင်ပြီး လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံဝတ္တု၊ အံ့သြဖွယ်ရာ၊ ယေရှုလုပ်ဆောင်ချက်များ ကျမ်းတိုတိုလေးများကိုရွေးချယ်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းတခု ဥပမာ မောရှေ အသက်သာကို အခန်းဆက်အဖြစ် တပတ်လုံး လေ့လာနိုင်ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက် အဓိပ္မါယ် ကောက်နှုတ်ရန် အခြေခံမူများ ( Principles of Bible Interpretation )
၃။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက် အဓိပ္မါယ် ကောက်နှုတ်ရန် အခြေခံမူများ ( Principles of Bible Interpretation )
(၁) သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ မမှားနိုင်သောဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပေးသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်ကို အစဉ်သတိရပါ၊ သမ္မာကျမ်းစာတွင် အမှားလုံးဝမရှိ။ ဘုရားသခင်က သင့်ကိုသိစေလိုသောအရာများ၊ သိရန်လိုအပါသော ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာကို ကျမ်းစာတွင် မွတ်ဆိုထားသည်။
(၂) အနက်အဓိပ္မါယ်ကောက်ရန် အခြားမူတခုမှာ သမ္မာကျမ်းစာကို အဓိပ္မါယ်ကောက်သည့်အခါ ရာဇ၀င်နောက်ခံသဘောကို အလေးပေးရန်လိုပါသည်။ ဤနောက်ခံသဘောကို ရှုထောင့် (၃)မျိုးမှ လေ့လာရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ဒုတိယ ရှုထောင့်မှာ ရေးထားသော အကြောင်းအရာ (သို့ မဟုတ်) အဖြစ်အပျက်များသည် မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပျက်သည်၊ ထိုတိုင်းပြည်၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို နားလည်ရန် လေ့လာရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ရုသ ၀တ္တုကို နားလည်ရန် ထိုတိုင်းပြည်တွင် မုဆိုးမများနှင့် ပတ်သတ်သော ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု စသည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤအကြောင်းအရောနှင့်ပတ်သတ်၌ ၀တ်ပြုရာကျမ်း (၂၅) နှင့် တရားဟောရာကျမ်း (၂၅) တို့ တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
(ဂ) တတိယ ရှုထောင့်မှာ ကျမ်းစာကိုလေ့လာရာ၌ ထိုအချိန်ကာလက တကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့သော သမိုင်းအခြေအနေနှင့် ဖြစ်ရပ်များပေါ်မူတည်၍ အနက်အဓိပ္မါယ်ကောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကိုလေ့လာသည့်အခါ အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ ထိုအချိန်က ပါလေတိနပြည်နယ် တ၀ှမ်းလုံးရှိ ယုဒလူမျိုးများသည် ရောမအင်ပါယာ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် အဖိနှိပ်ခံနေရသည်ကို နားလည်ထားရန်လိုအပ်သည်။
(၄) အနက်အဓိပ္မါယ်ဖွင့်ရာတွင် အရေးကြီးသောမူတခုမှာ ကျမ်းချက်တခုတွင်ပါဝင်သောကျမ်းပိုဒ်များ၏ ရှေ့ နောက် အကြောင်းအရာ ( Context ) ပေါ်မူတည်၍ အနက်ကောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ ဆာလံ ၁၄း၁ တွင် “ဘုရားသခင်မရှိ” ဟုဖေါ်ပြထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် “မိုက်သောသူသည် ထင်တတ်သည်” ကို ဖတ်မှသာ အဓိပ္မါယ်အတိအကျ ပေါ်လွင်လာမည်ဖြစ်သည်။
(၅) စကားလုံး. ဆိုလိုရင်းကို အဓိပ္မါယ်ပေါ် မူတည်၍လည်း အနက်အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်ယူပါ။ ဥပမာ – “ဆုတောင်းခြင်း” (Prayer) “ကြားခံဆုတောင်းခြင်း” (Intercession) “ အသနားခံ၍ တိကျသော တောင်းလျောက်ခြင်း” (supplication) အစရှိသော စကားလုံးများ၏ အဓိပ္မါယ် အနည်းငယ်စီ ခြားနားသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
(၆) သမ္မာကျမ်းစာ၏ အနက်အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်နှုတ်သည့်အခါ ဘော်ပြပါအကြောင်းအရောနှင့် ပတ်သက်သည့် အခြားကျမ်းပိုဒ်များအာဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျမ်းစာတအုပ်လုံး၏ ဆိုလိုရင်းအကြောင်းအရ လေ့လာပြီး အဓိပ္မါယ်ကို ကောက်ရမည်၊
ကျမ်းစာကို ဖတ်လျှင် ဘုရားသခင်မှ လူသားတို့ ကယ်တင်ခြင်းရဘို့ရန် ပေးထားသော နည်းလမ်းကို ကျမ်းစာအစမှ အဆုံးအထိ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုထားသည်ကို နားလည်လာလိမ့်မည်။ နားလည်ရန် ခက်ခဲသော ကျမ်းပိုဒ်များကို တွေ့သောအခါ ကျမ်းစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ခြုံငုံ၍ မြင်တတ်ရမည်။ ဥပမာ – ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘော်ပြထားသော သားကောင်ယာဇ်များသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ခရစ်တော် အသေခံခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံခြင်းသဘောကို ပုံဘော်ပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ဤ လွယ်ကူသောနည်းများဖြင့် ကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုလေ့လာလျင် မှားယွင်းစွာ နားလည်မှုများနှင့် တဘက်စွန်းကျနားလည်မှုများမှ ကင်းဝေးစေမည်။ ထို့ အပြင် ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ပါရှိသော ခက်ခဲနက်နဲသည့် ကျမ်းပိုဒ်များ၏ သွန်သင်မှုများကို မှန်မှန်ကန်ကန် နားလည်နိုင်ရန် အထောက်အကူပေးပေလိမ့်မည်၊
Posted by mlgm at 10:43:00 PM0comments
ကျမ်းချက်များအလိုက် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း ( Bible Study by Verses )
ကျမ်းစာတွင်ရေးသားထားသော ရာဇ၀င်သမိုင်းဆိုင်ရာ ကျမ်းပိုဒ်များကို လေ့လာသောအခါ ကျမ်းချက်တခု (Verse) သည် အဓိပ္ပါယ် တမျိုးကိုသာ ရှင်းရှင်းလေး ဆိုထားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ – ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ အပိုင်းတော်တော်များများတွင်၎င်း၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏ အချို့အပိုင်းများတွင် ၄င်း တွေ့နိုင်သည်။
သို့သော်လည်း ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ဓမ္မစသ်ကျမ်းတွင် ကျမ်းချက်အများစုသည် မြင့်မြတ်သော သမ္မာကျမ်းစာ၏ သမ္မာတရားများဖြင့် ကြွယ်ဝခြင်းကြောင့် အသေးစိတ်လေ့လာရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကျမ်းချက်တခုတည်းကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
(၁) ကျမ်းချက်တခုတွင် ပါဝင်သော ကြိယာများအလိုက် လေ့လာနိုင်သည်။ ဥပမာ ယေ ၃း၁၆ ကိုလေ့လာနေလျှင် “ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်ရစေခြင်းငှာ” “ရစေခြင်းငှာ” “စွန့်တော်မူသည်” “ချစ်တော်မူသည်” အစရှိသော ကြိယာများကို တွေ့လိမ့်မည်။
ထို့နောက် အောက်ပါကဲ့သို့သော နှိုင်းယှဉ်ချက်များကို ရေးချနိုင်သည်။
ဘုရားသခင် စွန့်တော်မူသည် ——— လူတို့ ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်၊ လူတို့ ထာဝရအသက်ကို ရ၏။
ဘုရားသခင် ချစ်တော်မူသည် ——— လူတို့က ယုံကြည်၏
သို့မဟုတ်လျှင် ကျမ်းချက်တွင်ပါရှိသော နာမ် (Noun) များကို ဤနည်းတူ “ဘုရားသခင်” —– “လောကီသားတို့” —— “တပါးတည်းသောသားတော်” —- “သူအပေါင်း” — “ထာဝရအသက်” ဟူ၍ မှတ်သားထားနိုင်သည်။
(၂) ကျမ်းချက်တခုတွင် ဖေါ်ပြသော ပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့် လေ့လာနိုင်သေးသည်။ ဥပမာ ယောဟန် ၃း၁၆ ကိုပြန်၍ ကြည့်လျှင် “ဘုရားသခင်” “တပါးတည်းသော သားတော်” “သူအပေါင်း” အစရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရိုးရိုးလေးပင် ရေးထားသော်လည်း ထူးခြားချက်ကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည်။
(၃) ကျမ်းချက်တခုကို လေ့လာစဉ် မည်ကဲ့သို့သော မြင့်မားသည့် အတွေးအခေါ်များကို ဘော်ပြကြောင်း ရှာယူရပေမည်။ ဥပမာအနေဖြင့် ယောဟန် ၃း၁၆ ကို ကြည်မည်။ ဤကျမ်းချက်၏ ခေါင်းစဉ်ကို “ကျမ်းစာတအုပ်၏ အမွန်မြက်ဆုံးသော ကျမ်းချက်” ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်နိုင်သည်။ ဤကျမ်းချက်၌ အောက်ပါအကြောင်းအချက်များကို တွေ့နိုင်ပါသည်။
“ဘုရားသခင်” – အမြင့်မြတ်ဆုံးသောလူ
“ချစ်တော်မူ၏” – အမြင့်မားဆုံးသော မြတ်နိုးမူ
“လောကီသားတို့” – အကြီးမားဆုံးသော အရေအတွက်၊
“စွန့်တော်မူ၏” – အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ဆောင်ရွက်ချက်
“တပါးတည်း” – အမြင့်မြတ်ဆုံးသော လက်
“တပါးတည်းသော သားတော်” – အမြင့်မြတ်ဆုံးသော လက်ဆောင်ပဏာ
“ယုံကြည်သောသူအပေါင်း” – အကြီးမားဆုံးသော အခြေအနေပေးမှု
“ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်” – အကြီးမားဆုံးသော ဂရုဏာတော်
“ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှာ” – အကြီးမားဆုံးသော အကျိုးထူး၊ အခွင့်ထူး
(၄) တခါတရံ ဘော်ပြပါ အတွေးအခေါ် အယူအဆများအားဖြင့် ကျမ်းချက်တခုကို လေ့လာလျှင် ကြွယ်ဝသော အကျိုးအမြတ်ကို ရနိုင်သည်။ ဥပမာ ရောမ ၅း၁ ကို ကြည့်ကြပါစို့ -
“ထို့ကြောင့်” ဖြင့် အစပျိုးသော ဤကျမ်းချက်သည် ၄း၂၅ ကို မှီး၍ ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းက ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် အာမခံချက်ကိုပေးသည်။
“ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျှင်” – အမှန်တရားကို ဖြစ်စေသည်။ “ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်” – ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်နည်းလမ်း (၃း၂၄ နှင့် ၄း၉ ကိုလည်းကြည့်ပါ) “ခံစားကြ၏”။ – ယခု ခံစားရသော အခွင့်အရေး ‘ငြိမ်သက်ခြင်း’ – ကျွနိုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ယခုတွင် ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် လူသား ကျွနိုပ်တို့အကြား ကြေအေးမှုကို ရပြီ။
“ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်” – ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်၌ မျက်နှာရခြင်းကို ယေရှုခရစ်တော် တပါးတည်းသာလျှင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
ဆိုက်မှာချိတ်ပေးရန် Code များ
Blog Archive August (1) May (4)
Copyright (c) 2011 Myanmar Grace Ministries (MGM).